Chiratidzo Chechikara, totenda Roma neAmerica. Zvakazarurwa Chitsauko 13
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chiratidzo Chechikara, totenda Roma neAmerica. Zvakazarurwa Chitsauko 13
Chiratidzo Chechikara, totenda Roma neAmerica. Zvakazarurwa Chitsauko 13
Zvakazarurwa Chitsauko 13 - chiratidzo chechikara - chakaparadzirwa neRoma neAmerica.
Chiratidzo chechikara chinotyisa sezvo chichimiririra avo vakanyengerwa naSatani achibva avatapa. Satani akabata basa rake zvakanakisa sezvo kuipa kwawandisa panyika ino. Izvi zvinoita kuti tinzwe kunge Satani ari kutonga uye kuti hatikwanisi kurarama tichidzivirira kukanganisi.
Asi Mwari anopa zvakaipa muganhu oshandisa zvakonzereswa nechakaipa kuzadzisa hurongwa hwake.
chitsauko iyi inovhura nyaya yakanaka, zvakare inotsanangura zvakareruka, miganhu isingakwanisi kudarikwa nechakaipa.
Gungwa (rinomiririra vanhu vazhinji vasina kugadzikika) rine masimba makuru. Mhepo huru dzinosimudza mafungu makuru ichiarasira kunyika yakaoma asi kwapera chinguva gungwa rinodzikama rodzokera pamuganhu waro. Jecha remahombekombe egungwa (rinomiririra vakarurama) vanorarama vachigarira kuisa miganhu yegungwa. Vanhu vakatsiga vanonamata, nemabasa avo akanaka nemiyenzaniso yakanaka yavanopa, vanoisa miganhu pakuitika kwehuwori. Zvinongoda munyu mushomanana, vashoma, kuita kuti nyama isaore.
ZVAKAZARURWA 13:1 Zvino ndakavona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine gumi, napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari.
Chikara ndicho simba rezvematongerwo enyika nezvechitendero rakasimuka kunotonga pfungwa dzevanhu nezvinotendwa mazviri nemarudzi. Chikara chinomiririrawo kusimuka kwehutungamiriri hwevanhu venyama kuti vatonge kereke kusvikira mirairo yevanhu paichatsiva Shoko raMwari.
Misoro minomwe inomiririra zvikomo zvinomwe zvaive zvakavakirwa guta reRoma rekutanga.
Nyanga gumi ndivo vadzvanyiriri gumi vachapa simba ravo rezvekurwa kuna Pope wenguva yekupedzisira kuti akwanise kutonga nyika munguva yeKutambudzika kukuru.
Havasi madzimambo akagadzwa asi vane simba seremadzimambo. Ndivo vadzvanyiriri.
Kumhura ndipo paya patinorwisa Magwaro tobva pakurarama maererano neMagwaro.
Mwari ane Zita rinoreva kuti (Ishe) uye anorarama pamusoro pemaJuda.
Zvino Mwari vakaratidzwa panyama apo kuzara kwovuMwari kwakagara muna Kristu Jesu panyama, kumuita “Mwanakomana waMwari”. Hatikwanisi kutaura tichiti “Mwari Mwanakomana” sezvo Bhaibheri harina kubvira rareva richidaro nekuti Mwari ndiMweya - Mwari haasi nyama neropa. Saka Munhu Jesu aive asiri Mwari, asi Mweya wairarama muMunhu Jesu ndiwo waive Mwari. Saka Jesu aive zvese munhu uye Mwari. SeMwanakomana waMwari, Aive Munhu, Mwari akararama pakati pevanhu vake. Emanuere, Mwari anesu.
Nhasi uno “Mweya waMwari” uchiri kurarama Mumuviri waKristu (zvinoreva Wakazodzwa) anogara kudenga pachigaro chenyasha. Asi tichiwedzera, Mwari anokwanisa kudurura Mweya uyu mumwoyo yavanhu vanotenda. Tinozvidaidza kuti kuzodzwa kana kuti rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Mutendi mumwe nemumwe anowana chikamu cheMweya uyu. Kereke yese ikaiswa pamwe inova kuzara kwaMwari. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti “Mwari Mweya Mutsvene” nekuti Mweya Mutsvene hausanganisi Muviri waKristu agere sechibairo pachigaro chenyasha. Saka seMweya Mutsvene, Mwari anokwanisa kurarama mumwoyo yavanhu vake.
Mwari pamusoro pevanhu saBaba. Mwari achifamba pakati pevanhu vake seMwanakomana. Mwari ari mukati mevanhu vake seMweya Mutsvene kuti avazodze. Saka Zita rimwechete raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiro Ishe Jesu Kristu.
Kutaura kuti Zita raMwari ndi “Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene” kukanganisa. Mazita ezvinzvimbo zvitatu haangatsive Zita remubati wezvinzvimbo zvacho.
Nekudaidza kuti “Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene” Zita raMwari tinenge tabvisa zita raMwari wedu wemaKristu. Mwari akava Munhu saka Zita rake remunhu ndiIshe Jesu Kristu.
Rubapatidzo rwemvura rwunomiririra kufa kuvigwa nekumuka kwaJesu Kristu. Mweya Mutsvene hauna kubvira wafa kana kuvigwa. Mwari Baba havana kubvira vafa kana kuvigwa. Saka rubapatidzo rwemvura harwuna chekuita naBaba kana kuti Mweya Mutsvene.
Chero zita rinotsiva Zita raIshe Jesu Kristu seZita raMwari kutadza kukurusa.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawaona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu navazhinji namarudzi nendimi.
Mahombekombe egungwa akakosha muMagwaro. Ndiwo mutsetse unopatsanura nyika yakaoma negungwa.
Gungwa rinomiririra vasakarurama, vanhu vazhinji vasina kugadzikika vanoshanduka nekushanduka kwemamiriro ezvinhu uye mazano evanhu. Jecha riri mumahombekombe megungwa rakafufunyuka kubva padombo pane imwe nguva nekuda kwemamiriro ekunze. Kristu, Shoko, ndiye Dombo redu. Vanotenda vakazvarwa patsva maari uye vanoramba vari chikamu cheShoko rake (Magwaro).
I VAKORONTE 10:4 Vose vakanwa zvekunwa padombo romweya rakavatevera; dombo iro rakanga riri Kristu.
Saka jecha riri pamahombekombe egungwa rinomiririra vakarurama. Mahombekombe egungwa anomiririra muganhu wegungwa. Mwari anotendera gungwa (vasakarurama) kuenderera pakuedza kwavo kudzikisira vatsvene uye kuvaparadza (jecha remumahobekombe egungwa). Vakarurama vanomiririra muganhu usingakwanisi kudarikwa nechakaipa. Kumira kwako neBhaibheri kunoita zvizhinji pakudzosera chakaipa kumashure kukunda zvatinofunga. Makristu ekutanga aidyiwa neshumba mugomba reshumba kuRoma asi kumumwe nemumwe akafa, mapegani mazhinji aishamiswa kwazvo nekushingirira kwavaiita uye nekutenda kwavo zvekuti vakasvikira pakugamuchira Ishe Jesu Kristu. Kwekupedzisira kuuraiwa kwaityisa kwevanhu uku kwakamiswa. Chimwe chikamu chezvakaipa chaive chasvika pamaganhu acho. Asi mhondi dzinovhundutsa idzi dzaive dzaunza mapegani akawanda kuruponeso. Munhu aifanira kuti arovererwe parutivi paJesu asati agamuchira ruponeso. Kurwadziswa panyama ndiko kunotiita kuti tive vakaoma moyo, vadi vemagarikwa, vanhu vasingadzoreke, vanhu vanozvigutsa, uye kuti tive nehukukutu pakutarisa shure kwedu kuti tione kuti tinoda Muponeso. Mwari anoshandisa chakaipa kutimutsa asi anopa muganhu pakupararira kwechakaipa ichi kuti chisazoparadza vanhu vose.
JOBO 26:10 Akatara muganhu pamusoro pemvura; Kusvikira pakuparadzana kwechiedza nerima.
Nyika ino ine miganhu yayo. Zuva renyika ino rine maawa 24. chiedza nerima zvinoganhurana kuitira kuti chimwe nechimwe chive nenguva yacho yakaringana. Nyika yakaganhurwa negungwa. Hupenyu hunoganhurwa nerufu. Pakupedzisira chiedza chichatsiva rima uye gungwa richanyangarika. Rufu, gungwa, uye rima rehusiku zviratidzo zvezvakakanganisika panyika. Izvi zvakakoshera kukura kwedu. Kuomerwa, kuchema, zvivi, kukanganisa, kunyengera, zviitiko zvese zvenyika ino zvakaipa zvakakoshera kutiedza, kutisimbisa, kutiranga uye kutipa hondo dzekurwisa.
Kurwa ndiwo murairo wekukura.
Kukundwa nekuomerwa ndizvo sando uye mvuto dzekukwenenzvera uye kuumba hunhu uye kuhusimbisa. Kana tikabhabhadzira chakaipa tinobva tava vakareruka kunopinda munguva yekutambudzika kukuru.
Saka zvakaipa zviripo kwekanguvana kuti zvitiumbe kuti tive zvinodiwa naMwari kuti tirarame tiri; kwete zvatinoda isu kuhupenyu hwedu.
ZVAKAZARURWA 21:1 Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisipo.
ZVAKAZARURWA 21:25 Masuwo aro haangatongozarirwi masikati, nokuti husiku habwuchazovipo.
Nguva ichasvika yekuti hakuchazovi negungwa uye hakuchazovi nerima.
Zvakaipa uye kutadza zviripo kwekanguvana kusvikira zvapedza basa razvo hazvizovepo zvakare.
Hakuna munhu anokwanisa kudarika miganhu yaakaisirwa naMwari. Hunhu hwevanhu hwekutadza hwavakaberekwa nahwo hunoda kuchekwa kubva pamakaro uye kungofunga nezvavo chete vasina basa nevamwe.
Mumwe nemumwe wedu anofanira kudzidza kugona kurarama nemiganhu yaakaisirwa naMwari.
Miganhu iyi yakakoshera kurarama kwedu.
Sero rimwe nerimwe mumuviri yedu rine miganhu pakukura kwaro uye pabasa raro. Gomarara isero rakarwisa miganhu yaro, saka rinongokura nekuti rinoda kukura. Mwari anoshandisa zvakaipa uye kutadza kuti aumbe kereke yake, kupfuura munguva dzose dzakasiyana-siyana dzemakereke manomwe, asi kwekupedzisira zvakaipa zvichabviswa. Kusvikira panguva iyi, kereke inofanira kugutsikana uye kugona kurwisa kutadza kwenguva yayo.
JEREMIA 5:22 Zvanzi naJEHOVA, 'Hamundityi here? Hamudedere pamberi pangu here, ini ndakaisa jecha rive muganho wegungwa ndikatema chirevo chisingaperi kuti rirege kuudarika? Zvino kunyangwe mafungu aro achipenga, haangakundi.
Asi zvakadaro zvakanaka zvinoisira zvakaipa muganhu. Chakaipa hachifi chakadzima chokwadi. Vatendi vanokwanisa kuparadzirwa asi chokwadi chinoparidzwa chete nekuda kwekupararira kwavo. Vatendi vakawira pasi asi vatsva vanosimudzwa mune dzimwe nzvimbo. Munyu unomisa kupararira kwekuwora. Kubatsira vana vake, Mwari anoisa muganhu uye anoderedza simba rechakaipa. Chakaipa chinokwanisa chete kufamba nenzira inenge yatenderwa naMwari. Kusvika pamuganhu wachakatarirwa, kwete kudarikira. (Hondo yemaMongori yakabvongodza Russia uye kumabvazuva kweEurope iri pasi pemukuru wayo wemauto Tsubodai. Mauto emaHungarian akaparadzwa. Kumadokero kweEurope kwakanzwirwa tsitsi nekuti Pope aitambisa simba rake achiedza kurwisa mambo weRoma Mutsvene, aive Germany. Zvino Ogedai, muMongol Khan aive mwanakomana waGenghis Khan, mushure mekutonga kwenguva duku yemakore 12 chete akabva afa kupfurikidza kunwa hwahwa zvakanyanyisa. Mwanakomana wake Guyuk uyo aive naTsubodai nemauto emaMongori kuEurope, akabva atora mauto ese kubva kuEurope kuenda kuMongoria kunoreva chigaro cheushe kubva kuna sekuru vake Chagatai . Europe yaive yapererwa isisazivi zvekuita yakasunungurwa nekuda kwerufu rwemunhu mumwechete aive afira nyika iri kure-kure kuMongoria, panguva yakaoma kudai. Saka Mwari anobata nemubatiro unoshamisa kuti kuda kwake kuzadziswe.)
ISAYA 45:7 Ndini ndinoumba chiedza, nokusika rima; ndinoita rugare, nokusika njodzi; ndini JEHOVA, anoita zvinhu izvi zvose.
AMOSI 3:6 Ko hwamanda ingaridzwa muguta, vanhu vakasatya here? Ko guta ringawirwa nezvakaipa , JEHOVA asina kuzviita here?
Kuisa hudzamu mumufananidzo, munyori anoshandisa ruvara rwakajeka kuisa zvinofanira kunyanya kuratidzwa mumufananidzo uye ruvara rwakadzima kuisa mimvuri. Ruvara rwakajeka kana rwakadzima zvose zviri mumaoko uye pasi pesimba remunyori. Ruvara rumwe nerumwe rwakajeka kana rwakadzima rwunoenda chete panzvimbo yakakodzera pamufananidzo.
Kuita hunhu hune udzamu matiri Mwari anofanira kunyora muhupenyu hwedu nezviitiko zvakajeka uye zvakadzima. Saka vanhu vakanaka uye vakaipa vanoshandiswa naMwari kuti vatiumbiridze. Vese vari pasi pesimba raMwari.
Bhaibheri ndiro Bhuku rechiporofita, rinotipa muono wezviitiko zvekumberi.
Chitsauko 13 ichatibuditsira pachena kubata kwakaoma kwemasimba makuru maviri, kereke yeRoman Catholic neAmerica. Masimba maviri aya ese akabata basa guru pakuunza nyika pasi pechiratidzo chechikara.
2 VATESARONIKA 2:6 Zvino munoziva chinodzivisa, kuti aratidzwe nenguva yake.
Mwari haabvisi chakaipa. Dzimwe nguva anodududza osiya chakaipa chichisimuka. Zvakaipa zvatinotarisana nazvo kuedzwa kwekutenda kwedu. Zvakaipa zvinogara zviri zvinhu zvinopesana nezvakanyorwa muBhaibheri. Tinogona kugara tichitevera zvakanyorwa here? Kana tisingakwanisi zvinoreva kuti tiri chikamu chekufamba kwezvakaipa uye tiri kuzvinyengera kana tichiti tinotevera Mwari kana tichizviita nenzira inorwisa Magwaro.
II VATESARONIKA 2:7 Nokuti chakavanzika chokusarurama chotobate-basa racho; asi zvichaitwa bedzi kusvikira iye unodzivisa zvino achibviswa.
Izwi rekuti “kudzivisa” zvinoreva kuti “kukonesa”. Mwari haana kumisa chakaipa. Vanhu vachakuedza zvinodhaka kana mudzanga wefodya. Vanhu vachapika pamberi pako. Asi Mwari vanotarisa chaunoita pakupindura zvose izvi. Kana ukabvumirana nekufurira kunoita vanhu mumagariro ako ekuda kuva nembiri wobva wabatana navo, zvinoreva kuti hautendi muna Mwari zvakadzama semafungiro aunoita.
Asi Mwari vanoisira zvakaipa muganhu. Mwari havazotenderi kuti zvakaipa zvibvise chokwadi kubva panyika. Panongogara paine vatendi vechokwadi, kunyangwe vachisarudzwa nekurambwa.
Saka Mwari vanoisa muganhu pamusoro pezvakaipa kuti vakarurama vararame.
“Iye oga (Kristu) uyo anodzivisa (anokonesa simba rezvakaipa) achadzivisa, kusvikira unodzivisa zvino achibviswa.” (Pakudzoka kwaJesu paachatora mwenga wake kuenda naye kudenga nyika yoenda munguva yeKutambudzika kukuru apo Mweya Mutsvene waKristu unenge usisipo panyika).
Asi kana Kristu akatora kereke kuenda nayo kumutambo wemuchato kudenga, ipapo simba rezvakaipa rinobva rapararira kwazvo nekuti Mweya Mutsvene unenge wabviswa panyika. Kana uchiti zvakaipa zvakashata iye zvino, mirira uone panotanga kutambudzika kukuru.
“Nokuti chakavanzika chokusarurama chotobate-basa racho”. Kutadza kwemasangano kwaive kwatotanga kubate-basa mukati menguva yekereke yekutanga. Kusarudzana.
I VAKORONTE 1:12 Zvandinoreva ndizvo, kuti mumwe nomumwe unoti: Ini ndiri waPauro, ini waAporo, ini waKefasi, ini waKristu.
I VAKORONTE 1:13 Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjiko nokuda kwenyu here? Ko makabapatidzwa muzita raPauro here?
Hatigutsikane kuva vaKristu. Tinotora mazano uye nzira dzevanhu kuti tive chikamu chesangano. Tinoda kutakura munembo kana chiratidzo chevanhu kuti tizivikanwe.
Masangano ndiwo chakavanzika chokusarurama. Kunoshandurwa Magwaro kuti aenderane nekufunga kwevanhu. Vanhu vanenge vakatarisira kuhutungamiriri hwemunhu.
II VATESARONIKA 2:8 Ipapo iye usakarurama uchaonekwa, uchaurawa naIshe Jesu nemweya wemuromo wake, achiparadza nokuvonekwa kwokuvuya kwake;
Pekupedzisira Jesu achaparadza Antikristu nevateveri vake paAmagedhoni. Usazova umwechete wavo.
Amai vemasangano ikereke yeRoman Catholic. Vanasikana vayo vakabuda mairi vachadzokera kwairi. Pamwechete, mubatanidzwa uyu uchaita bato rezvematongerwo enyika nezvechitendero richazotorwa naAntikristu. Dai vanhu vakagara nezvakanyorwa muBhaibheri, Antikristu haaizombokwanisa kufamba kuenderera mberi paachaita Pope. Asi Pope, Kadhinari achibhishopu ese mazwi asimo muBhaibheri nezvinzvimbo zvisimo muMagwaro saka ndiyani achaita shungu dzekutsvaga kuti abvise zviitiko zvisina kunyorwa muMagwaro. Kushaikwa kukwana kweMagwaro muvanhu kunozarura misuwo kuti zvakaipe zviwandise izvo zvakamirira kudururwa panyika panguva yeKutambudzika kukuru.
II VATESARONIKA 2:9 Kuvuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani nesimba rose, nezviratidzo, nezvinoshamisa zvenhema,
Kuita kwaAntikristu kwakachenjera kutidarika. Kana ukasagara uchitevera Magwaro sezvaakanyorwa, Satani anotsvaga nzira yakachenjera kuti atinyengere. Saka Bhaibheri ndiro nhovo yedu yega yatiinayo kuti itichegetedze kubva pakunyengera kwake kwakachenjera.
Saka tinofanira kusarudza. Kuva chikamu chevazhinji, gungwa risina kugadzikika. Kana kuva chikamu chevashoma jecha remahombekombe egungwa rakachena.
ZVAKAZARURWA 13:1 Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzinegumi, napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari.
Mukadzi chiratidzo chekereke nekuti kereke yechokwadi inodaidzwa kuti Mwenga waKristu.
Guta reRoma rinozivikanwa nekunzi guta remakomo manomwe. Uye kereke yeRoman Catholic inotonga guta reRoma.
Romulus akaita mutemo wekubhadhara mutero pazambuko raishandiswa nevaitengesa kuyambuka rwizi rweTiberi. Vamwe vake vakavaka dzimba dzavo pazvikomo zvaive zvakapoteredza. Pavakange vavakira pazvikomo zvese zvinomwe, vakavaka masvingo akapoteredza ekuchengetedza guta iri. Zvivakwa zvese zvine masvingo akazvipoteredza zvaizivikanwa kunzi guta. Saka guta remakomo manomwe raizokura uye kuva nembiri rozodaidzwa kunzi guta reRoma.
Nyanga gumi: Vadzvanyiriri gumi vane simba guru munyaya dzehondo nemauto.
ZVAKAZARURWA 17:12 Nyanga dzine gumi dzawavona, ndiwo madzimambo anegumi, achigere kupiwa vushe asi uchapiwa simba samadzimambo pamwechete nechikara nguva imwe.
“Simba samadzimambo”. Korona dzinomiririra madzimambo. Vaive nemasimba emutongi mukuru. Kana vaive nesimba seramambo, saka tingavadana kuti vadzvanyiriri.
Nyanga inomiririra simba rechikara. Vadzvanyiriri ava vachapa kereke yeCatholic, paichange yava kutongwa naAntikristu, hukuru hwemauto avo.
Vachaita awa ravo duku rekutonga munguva yeKutambudzika kukuru.
ZVAKAZARURWA 17:13 Ivo vane ndangariro imwe, vanopa chikara simba ravo nevushe hwavo.
Inyika dzakasiyana kwazvo (fungai nezveRussia neChina) asi vanobatana pasi pehutongi hwaAntikristu, vachimupa simba ravo remauto. Ane simba pamusoro pezvechitendero kubva pahudzvanyiriri hwemunhu muwechete ari Pope wemakereke akabatanidzwa uyezve simba pamusoro pezvematongerwo enyika nekuti maRoman Catholic ndiwo akawandisa mudzinyika. Mubatanidzwa wekuedza kuita runyararo pakati pemakereke epasi rese uri kutokwezvawo vemasangano akabuda muRoma, avo vanonyengereka zviri nyore mukunotenda zvinotendwa nekereke yeCatholic uye netsika dzayo, mukunoita zvido zvayo izvi ndizvo zvinozopa Antikristu wenguva yekupedzisira simba guru. Achange asingadzoreke zvachose.
“Pamusoro pemisoro yake mazita ekumhura Mwari”.
Kereke yeRoman Catholic, ichitonga guta remakomo manomwe yakaita kukanganisa kukuru kana takutaura pamusoro peZita raMwari. “ kumhura” izwi rakaomarara . Tinofanira kuchenjerera zvikuru.
Mapegani ndiwo akatanga neTiriniti. Mwari mumwechete muVanhu vatatu. Roman Catholic mai vemakereke ndiyo yakabva yatora tsika iyi kubva kumapegani. Vana vayo vakabuda mairi vemasangano vachibva vatorawo chitendero ichi kubva kuRoma. Izwi rekuti Tiriniti rakagara haritorimo muBhaibheri.
Mwari weTiriniti haana Zita.
Bhaibheri rinotaura pamusoro paMwari Baba', harina kubvira rataura nezvekuti “Mwari Mwanakomana” kana kuti 'Mwari Mweya Mutsvene'. Vanotevera Tiriniti havakwanisi kutsanangura kuti nei. Kutsanangura kwakaita sekuti “Munhu weKutanga muhuMwari”, “Munhu weChipiri muhuMwari”, “neMunhu Wechitatu muhuMwari” zvese hazvisi muMagwaro . Kuisa Kristu muhuMwari seMunhu wechipiri kutadza nekuti Pauro akaisa kuzara kwevuMwari muna Kristu.
VAKOROSE 2:8 Chenjerai kuti murege kutapwa nomunhu novuchenjeri nokunyengera kusinamaturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu.
9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari pamuviri.
Tiriniti inobvisa Zita raMwari zvakanakisisawo.
Baba, Mweya unogara nokusingaperi kubva kuTestamente yekare, pane maZita akawanda ekutsanangura maitiro ake akasiyana-siyana, asi Zita rake rinonyanya kuzivikanwa ndiJehova. Mwanakomana ane Zita, Jesu. Mweya Mutsvene hauna Zita.
Mazita maviri evanhu vatatu. Hazvina maturo.
Saka zvino edza kutsvaga zita rimwechete rekupa vanhu vatatu ava. Hazvigoneki. Saka Mwari wemaKristu anopedzisira asisina Zita. Saka kurera Tiriniti kuti irambe ichirarama, kereke yakatsiva Zita raMwari nemaZita eZvinzvimbo matatu: Baba, Mwanakomana na Mweya Mutsvene. Hapana chakaipa pazvinzimbo zvitatu izvi zvakaipisisa uye hazvigoni kuti titi zvinzvimbo zvitatu izvi iZita.
“Zita rekumhura Mwari” tinofanira kuchenjerera. Chero rimwewo zita kana kutaura kuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene iZita zvinotiisa munzvimbo yakaipisisa. Mwari wemaKristu angori nezita rimwe remunhu, Ishe Jesu Kristu. Musanyengerwe mukusvikira pakushandura izvi nechero nzira.
Mwari paaive Mweya aidaidzwa kuti Jehova. Mwari paakazviratidza ari munhu akadaidzwa nezita rekuti Jesu Kristu. Paakadaidzwa nezita rekuti Jesu muBhuku raMateo, Bhaibheri harina kuzodzokorora zvakare zita rekuti Jehova. Paakadaidzwa kuti Jehova kuTestamente Yekare,hakunawo kubvira kwataurwa Zita rekuti Jesu.
Saka Jehova wekuTestamente Yekare ndiye akazoita Jesu wekuTestamente Itsva.
ZVAKAZARURWA 13:2 Chikara ichi chandakavona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nomuromo wacho somuromo weshumba; shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo chovushe, namasimba makuru.
Toenda muTestamente yekare. Danieri akaona kusimuka kwevushe huna hwepasi rese. Hutatu hwekutanga hwakataurwa pano. Hwakatonga kwekanguvana hukakundwa hwose hukabva hwabva pachinzvimbo chekuva nembiri panyika. Chikara chechina chaive Rome asi payakakurirwa nemarudzi evatorwa, Roma “yakazomuka kubva kuvakafa” yave kereke yeRoman Catholic saka nekudaro mweya weRoma wakaramba uchitonga. Makumbo edare mumufananidzo waDanieri aimiririra humambo hwekumabvazuva uye hwekumadokero kweRoma. Dare raive rakasimba iri rakazoshanduka kuva rakasangana nevhu kutsoka dzemufananidzo uyu. Mweya weRoma yemapegani wakapindawo mukereke yeRoman Catholic.
“Muromo weshumba” asi Roma nekereke yeRoman Catholic zvakakurudzirwa nezvikara zvitatu zvekutanga, hushe hutatu hwepasi rese hwekutanga. Babironi ndiyo yaive shumba. Zvakavanzika zveBabironi zvakafanana neTiriniti, zvakauya kuPegamo zvichibva kuBabironi zvikazodarikira kuenda kuRoma. Mupurisita mukuru wekuBabironi aidaidzwa kunzi Pontiffi. Nazvino Pope achiri kudaidzwa kuti Pontiff. Pope achiri kuparidza Tiriniti. Achiparidza zvakavanzika zvisingakwanisi kunzwisisika ndiyo kiyi huru yavari kushandisa kubvisa vanhu kuMagwaro vachivasungirira mubato rezvechitendero. Mazwi ane hungwaru anobata moyo zviri nyore akaita seTiriniti, Kisimusi, nemuti weKisimusi zvinofadza vanhu zvovadzivisa kuti vasaone kuti mazwi aya haasi muBhaibheri.
Babironi yaionekwawo semusoro wendarama. Saka mari nehupfumi zvakakosha kuitira kuti kutadza kuziviswe uye kugare muvanhu. Kumhanyira kutora ndarama zvinoratidza kereke yanhasi.
“Tsoka dzebere”. Hushe hwePesia ndihwo hushe hwekutanga hwepasi rose. Kuti vahutonge vaifanirwa kuva nebato rakasimba rine zvigaro zvakasiyana-siyana zvevatongi, magavhena, mamaneja nevamwewo vakadaro. Saka kuvaka bato rekereke yakakura inoda zvigaro zvakarongeka zvakaita sezvana Pope, maKadhinari, maMeturoporiteni, maArchbhishopu nevamwe vakadaro. Hapana chimwe chezvigaro izvi chakataurwa nezvacho muBhaibheri. Kereke yega-yega panzvimbo inofanira kutongwa nemupurisita anova akavimbika kuna Pope. Munhu mumwechete ndiye anotonga zviri kuitwa mune mamwe makereke akazvimiririra zvakare.
Bato guru rezvechitendero rinoramba richienderera mberi uye haringamiswi nechero munhu mumwechetewo zvake. Asi zvakadaro vanhu vakawanda vanopokana nazvo, bato rinoramba richienderera mberi. Saka sangano rakakura rakakosha kuitira kuti chakaipa chienderere mberi. Kukura kwaro kunakawo kwezvinhu. Saka kuva nevanhu vakawanda inzira yakanaka kushandisa kuita kuti chakaipa chirarame.
Tarirai zvinoitika mukereke yanhasi kuti vanotarira kubudirira kwavo zvichienderana nekuti taita mari yakawanda sei uye tawana chinzvimbo chakakura sei. “ndakafuma ndakafumiswa, handishaiwe chinhu”.
“Chikara chandakaona chaive chakaita sengwe”. Ingwe inomhanya kwazvo uye inokasika kufunga nekuita chinhu. Izvi zvaimiririra maHedeni. Vanokasika pakufunga uye inyanzvi mune zvenhaurirano dzemadhibheti sezvo ndivo vakaunza firosofi uye dzidzo dzepamusoro dzakaita se jiyometiri. Zvikoro zvekudzidza Bhaibheri kana masemina dzakava nzira dzekutapa nadzo vatendi vatsva kuti vafunge mafungiro esangano rinenge riri navo. Vanobudirira muzvidzidzo zvavo kana vachinge vagona nekudzidza zvavadzidziswa chete. Saka panguva yavanopedza zvidzidzo zvavo vanenge vakwanira padzidziso dzesangano ravo ravadzidza vari vozopedza hupenyu hwavo hwese vachidzidzisa tsika dzesangano ravo. Kana munhu akadzidza chimwe chinhu, haazodi kuziva kuti chaive chakaipa kana kuti chaive chekunyepa. Ingwe ingashadure mavara ayo here?
“shato ikamupa simba rayo, chigaro chayo, uye simba rekutonga rakakura kwazvo”.
Kubva pamaonero edu sevanhu kereke yeRoman Catholic ibudiriro huru kwazvo. Ine simba nekurudziro huru kwazvo. Asi Magwaro anoti simba risingaonekwe riri kuita kereke iyi ndiye Satani.
Constantine akava mambo weRoma muna 312 AD. Akabva apa Bhishopu weRoma muzinda weLaterani waive wakanakisa kuita chigaro chake. Kwaive kuremekedzwa kwakadii kuna bhishopu weRoma. Izvi zvichiri zvakanyorwa kuti chigaro chekereke yeRoma kunyangwe vakazotamira kurwizi rweTiberi muzvivaka zvakanakisa zvemu Vatican. Pamusangano weNicaea muna 325 AD Constantine akapa makomborero ake kuTiriniti yeCatholic. Kusimudzirwa kwaBhishopu weRoma uku kwakazowedzerwa nepfuma yakapihwa Bhishopu weRoma naConstantine. Pakatamira Constantine kumabvazuva kuConstantinople kumakore akapoteredza 330 AD akasiya Bhishopu weRoma ari ndiye munhu wake akasimba kumadokero. ChiPope chaive chatanga kuwana simba zhinji mune zvematongerwo enyika muna 378 AD. Mambo vakafa muna 379 AD Theodosius akaitwa mambo. Akati iye semuKristu aisakwanisa kutambira chinzvimbo chaPontiff (mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi) icho chaigarobatanidzwa pana mambo weRoma kubva pamazuva aJulius Caesar. Damasus, Bhishopu weRoma, akabudirira pasarudzo dzekuva Bhishopu kupfurikidza kuuraya aimukwikwidza nevateveri vake vaisvika 160, akaita kuti chinzvimbo chaPontiff chive naBhishopu weRoma uyo anova achiri nacho nhasi uno. Damasus aive muzukuru wamambo Theodosius saka akawana rutsigiro uye kuchengetedzwa kukuru mune zvematongerwo enyika.
Muna 390 AD mambo Theodosius vakapa simba kuna Bhishopu Ambrose kuti ave nesimba repamusoro-soro munezvemweya, kunyangwe pamusoro pamambo. Theodosius akaita izvi kuti atsive vanhu 7 000 vaaive auraya zvine hutsinye paTesaronika. Theodosius akabva atanga kuuraya mapegani akaenderera mberi kusvika pakuuraya vaipikisa chitendero, uye chero munhu zvake aipikisa chiCatholic. Kunana 450 AD Bhishopu Leo I akati ane mvumo yekuuraya vapikisi vechiCatholic kana maKristu aisawirirana nekereke yeCatholic. ChiPope chaive chichitora simba guru nekukasika.
ZVAKAZARURWA 13:3 Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu; asi vanga, raifanira kuvuraya, rakanga rapora nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara.
Romulus, kunana 750 BC akatanga kuvaka dzimba pamusoro pemakomo ePalatine aive pedyo nezambuko raishandiswa kuyambuka rwizi rweTiberi nevatengesi. Akatanga kutora mutero kuvatengesi vasati vayambuka. Nzvimbo iyi yakabva yakura kusvikira paita dzimba pamusoro pemakomo ese aive akapoteredza ari manomwe. Chero chikwata chezvivakwa zvaive nemasvingo akapoteredza chaidaidzwa kuti guta. Saka Roma yakatanga kuzivikanwa seGuta reMakomo Manomwe. Chikomo chimwechete, gomo repakati rakasarudzwa kuti rive muzinda wehurumende. Kubva pagomo iri ndipo paizoitwa mitemo yese yaizoteverwa nevanhu vese. Muna 395 AD hushe hweRoma hwakapatsanurana kuva nyika mbiri Roma rikaitwa guta renyika yekumavirira.
Denderedzwa raive ranyorwa richitenderedza gomo repamutsetse mukuru. Zvivakwa zvehurumende, zvikuru, zvaive zvakavakirwa pamusoro pegomo iri.
Zvino marudzi evatorwa akaparadza hushe hweRoma. Muna 476 AD Odoacer werudzi rwemaHeruri rwekuGerman akabvisa mambo wechidiki aive nemakore 15 wekumadokero kweRoma Romulus Augustulus, aive atonga kwemwedzi gumi chete, akava mambo weItaly. Saka hushe hweRoma hwakaperera kumadokero. Odoacer haana kuzogara muRoma saka chikomo chemutsetse mukuru chakabva charasikirwa nekukosha kwacho seguta guru rehushe hweRoma. Mitemo yaive isisatarirwi mariri. Gomo remutsetse mukuru raive ragamuchira ronda guru kwazvo sezvo raisazokwanisa kuva muzinda wehurumende yepasi rese. Roma seguta rakatanga kuparara apo Italy yakabva pakuva nemasimba ezvehondo. Roma yaive isisiri muzinda waibva mitemo kuti yaizoteverwa pasi rese.
Shanduko huru inorasisa yakabva yaitika.
Bhishopu weRoma uyo chigaro chake chebasa chaive pamuzinda weLaterani pachikomo cheCaelian, chaive chimwe chezvikomo zvinomwe zvekutanga zvaive zvakavakirwa Roma, akatanga kusimuka kuva nesimba pakati pemarudzi evatorwa. Mumadota ehushe hwaive hwaparara, vanhu vakatanga kutarisa kukereke kuti vawane rubatsiro kuti vawane kugadzikika. Madzimambo emarudzi evatora aimborarama hupenyu hupfupi huzere hutsinye. Vakatanga kuyemura kuenderera mberi kwekereke yeRoman Catholic yaive yararama kwemakore anosvika 500. Makore akapoteredza 400 AD bhishopu weRoma Siricius, aive bhishopu wechi 38 weRoma, akatanga kuzivikanwa saPope, nekufamba kwakazoita makore mabhishopu eroma akabva asimba kuti ivo voga ndivo vaikwanisa kutora chinzvimbo chekuva maPope. Negore 450 AD Pope Leo I aizvidaidzawo kuti Pontiff, mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Izvi zvakamupa kukudzwa kukuru pakati pemarudzi evatorwa echipegani. Nekusiya bhishopu weRoma, ave kudaidzwawo kuti Pope, achivagadza semadzimambo, vakakwanisa kuzviti vari pamutemo zvekuti vana vavo vaizovatsiva semadzimambo. Kumashure, chero munhu aive avauraya ndiye aibva ava mambo. Saka Pope akasimuka mukubata kukuru uye kuva nesimba. Pakamanikidzika hushe hweRoma, maPope akabatsira vanhu zvikuru nerubatsiro rwezvinhu zvinodiwa mukurarama mazuva ese vakapedzisira vava pamusoro muhurumende pakutonga Roma nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza (nharaunda dzemaPope). Pope Leo 3 pavakagadza Charlemagne samambo wenyika yeRoma tsvene muna 800 AD, kukudzwa kwechipope kwakaipiswa. Pope Innocent III vakatora masimba pamusoro pemadzimambo muEurope. Chipope chaive chatora simba raive rarasikirwa nemadzimambo eRoma pavakakundwa naOdoacer. Saka ronda guru, kurasikirwa nesimba rezvematongerwo enyika kwakaitwa neRoma yechipegani apo chikomo chepamutsetse mukuru cheguta guru reRoma pachakatorerwa simba rekutonga, rakaporeswa apo Pope, achigara pachikomo cheCaelian, akasimuka kuva pachinzvimbo chekutungamirira mune zvematongerwo enyika uye zvemweya pakati pevatungamiriri vepasi rese. Nhasi uno Pope achiri nekurudziro huru pamusoro penyaya dzezviitiko zvepasi rese. Kuungana kukuru kwakaitwa nevatungamiriri venyika dzepasi rese kwaive parufu rwa Pope John Paul II muna 2005. Pope pachokwadi aive nesimba guru pamweya pamusoro pevanhu vanonamata chiCatholic vanosvika 1,2 bhiriyoni vakapararira nepasi rese. Vatican iri kusimukirawo pambiri pasi rese sesimba rekereke (bhiza jena rekunyengera kwechitendero muChisimbiso chekutanga chekuna Zvakazarurwa chitsauko 6) uye sesimba munezvematongerwo enyika (bhiza dzvuku reChisimbiso chepiri) uye sesimba munezvemari (bhiza dema reChisimbiso chechitatu).
ZVAKAZARURWA 6:1 Zvino ndakavona Gwaiana richizarura chimwe chezvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi romutinhiro: Vuya uvone.
2 Ndikatarira ndikavona bhiza jena, naiye wakanga akaritasva, wakanga anovuta; akapihwa korona akabuda achikunda, vuye kuti akunde.
Pope Nicholas I (858- 67) akava Pope wekutanga kupfeka korona kuratidza kuenzana kwake nemadzimambo.
3 Wakati azarura chisimbiso chechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichiti: Vuya uvone.
4 Ipapo rimwe bhiza rakabuda riri dzvuku; wakanga akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti vavurayane; akapiwa munondo mukuru.
5 Wakati azarura chisimbiso chechitatu, ndikanzwa chisikwa chechitatu chichiti: Vuya uvone. Ndikatarira ndikavona bhiza dema; wakanga akaritasva akanga ane chiyereso muruvoko rwake.
6 Ndikanzwa inzwi pakati pezvisikwa zvipenyu zvina, richiti: Chiyero chezviyo chichatengwa nedenari+, nezviyero* zvitatu zvebhari nedenari+; usatadzira mafuta newaini.
Chitendero, zvematongerwo enyika uye mari ndiwo makiyi ekuvhura musuwo wekuva nesimba panyika.
ZVAKAZARURWA 13:4 Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba; vakanamata chikara vachiti: Ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho?
Chikara mufananidzo wemasimba. Kune kushingaira kukuru kuri muvanhu pakutevera uye kuisa tariro yavo muhutungamiriri hwevanhu. Kunamata munhu anoyemurwa kwakaipa kwazvo. Vanhu vanotevera mafirimu, vaimbi, nevanoita zvemitambo vanowanzoratidza kuita uku. Simba rakasimbisisa mune zvemweya rakavakwa nevanhu ikereke yeRoman Catholic. Vanotora mai Maria nevamwe vatsvene vakafa kare sevanhu vekunamata. Vanopfugamira Pope kuti vatsvode ringi yake. Nyoka chiratidzo chaSatani.
ZVAKAZARURWA 12:9 Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiyabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika yose; yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo.
Vanhu vari panyika vanosarudza kunamata Satani pachinzvimbo chaMwari. Havadi kurarama neBhaibheri nenzira yarakanyorwa naro. Vanotsvaga kereke inotendera kuti vararame sezvavanoda, kupfeka sezvavanoda, uye kuti vawane ruponeso rwavo nenzira dzinovaitira. Kuzviitira zvakanaka uye kudakara muhupfumi hwavo ndicho chinhu chikuru chinoshingirirwa nevanhu. Kereke inoendwa nevanhu vakawandisa ikereke yeRoman Catholic nekuti ndiyo inehuwandu hwakawandisa hwevanhu vanoendako. Bato guru iri rinomiririrwa nemutungamiriri waro, Pope. Mutungamiriri umwe neumwe wenyika, zvisinei nekuti ane simba rakakura sei, anotonga nyika yake chete. Asi Pope, semutungamiriri pamweya wekereke, ane vateveri munyika yega yega saka hakuna mutungamiriri angakwikwidzane naye pakuva nesimba zvichienzaniswa pasi rese. Hakuna angareve hondo pamusoro paPope nekuti vanonamata Catholic vari munyika dzese vanenge vachimutsigira, kusanganisira avo vanenge vari munyika yareva hondo pamusoro paPope.
ZVAKAZARURWA 13:5 Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura; chakapiwa simba kuti chizviite mwedzi inamakumi mana nemiviri.
Pope ane kurudziro yakapararira nepasi rese asi dzidziso dzechiCatholic dzaanotaura hadzibvi muMagwaro.
Mwedzi inamakumi mana nemiviri makore matatu nehafu. Ndiko kureba kwakaita nguva yeKutambudzika kukuru apo Antikristu, uyo achatora chigaro chaPope kwekupedzisira, achatonga nekupwanya nyika munguva yekutambudzika inorwadza kwazvo zvatisingafungiri kuti zvichave zvakadaro. Horokasiti apo maNazi akaparadza maJuda 6 miriyoni nevamwe vaive vasiri majuda 6 miriyoni mukuuraya kwavo kwairwadza, kwaingova kuratidzira zvazvichave munguva yakaomarara iri kuuya iyi.
Makore matatu nehafu aya achave pakukura kwemasimba echipope. Ichavewo nguva yakaipisisa paNyika. Kune avo vanoda zvimwe zvisiri zvinotaura Mwari muShoko rake, vachasangana nesimba rese raSatani nekuipa kwake munguva yeKutambudzika kukuru.kuita kunotyisa uku kuchaita kuti vaone kuti vaitadza zvakadii.
ZVAKAZARURWA 13:6 Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari, nekumhura zita rake netabernakeri yake naivo vanogara kudenga.
Pope haateveri Magwaro. Kurwisa Magwaro hakusi kukanganisa kumhura Mwari. Kutaura kuti mazita ezvinzvimbo matatu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene izita raMwari kutadza kukuru. Kutaura kuti Vatican nezvivakwa zvayo zvakanaka ndiyo tabernakeri nenzvimbo tsvene dzinogara Mwari ndiko kumwe kutadza kukuru. Mwari vanorarama mumwoyo yevanhu vakazvarwa patsva. Ndiyo tabernakeri yake.
Makore 2 000 akadarika aigara muTemberi (nzvimbo tsvene) kuJerusarema (guta dzvene) kuParestina (nyika tsvene). Mwari oga ndiye mutsvene. Huvepo hwake ndihwo hwaiita kuti nzvimbo idzi dzive tsvene. Mwari vakabuda muTemberi panguva yekurovererwa kwaJesu. Muna AD 70 Temberi yakaparadzwa nemaRoma. Saka Mwari haachagareko zvachose. Parizvino ave kugara mumoyo yevanhu vakazvarwa patsva. Saka munokwanisa kuwana vanhu vatsvene (nekuti kana vakazvarwa patsva Mweya waMwari unenge wava mukati mavo kwete mune imwe nzvimbo inonzi tsvene. Saka Vatican kana chero chimwe chivakwa hazvikwanisi kudaidzwa kuti terbanekari kana kuti nzvimbo dzinogara Mwari.
Pope anonamata vatsvene vakafa kare kare. MaCatholic vanonamatawo kuna mai Maria nevamwe vatsvene vakafa. Kunamata vanhu vakafa kungori kumwechete nekupira midzimu. Izvi zvinovaderedza kusvika pachinhano chimwe nevanodeketera. Kungori kuedza kusiyanisa nekunamatwa kwaiitwa midzimu nemapegani kare. Asi pamweya chaipo kutadza.
ZVAKAZARURWA 13:7 Chikapiwa masimba vo kuti chirwe navatsvene, nokuvakunda; chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose, navanhu vose nendimi dzose, nendudzi dzose.
Makore akapoteredza 4 00 AD Augustine wekuHippo akati zvaitenderwa kuuraya maKristu vaisatenderana nechiCatholic. Kunana 450 AD Pope Leo I vakaturikira izvi semvumo yekuuraya maKristu vaipikisa chiCatholic. Saka kuuraya kwakatanga, kukakura zvakanyanya nekufamba kwenguva. Nguva yeRima nedzimwe mutsiridzo dzakatangwa nemaCatholic mumashure meMutsiridzo dzevarume vaive vamutsiridzi vakashinga, Martin Luther, akaona kereke yeCatholic ichiuraya vanhu vaisvika 68 miriyoni vaive vasiri maCatholic nevaibuda mairi. Parizvino hondo iyi yakadarikira kupinda munezvemweya, sezvo Catholic riri bato rinova sangano riri pasi pehutongi hwevanhu rakava muenzaniso kune avo vese vemasangano. Chitendero chemasangano, chigere pamafungiro evanhu, ndicho chiratidzo chechikara munjere dzevanhu. Kusukurudza pfungwa nendangariro kuri kuiswa pamaCatholic, vemasangano nevamwe vasiri maCatholic vachibviswa kubva pane zvakanyorwa muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 13:8 Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasinakunyorwa mazita avo mubhuku yeGwaiana rakabaiwa kubva pakusikwa kwenyika.
Pakutanga kwenguva Mwari akanyora mazita muBhaibheri, Bhuku reGwaiana reHupenyu. Aya ndiwo mazita matsva achaziviswa kwatiri patichashandurwa uye tagamuchira miviri mitsva.kana zita rako idzva ririmo iwe unotevera zvakanyorwa muBhaibheri. Nekurarama neMagwaro unova chikamu cheMwenga waKristu. Kana uasarudza kutenda mune zvimwe zvisingatsigirwi neBhaibheri unokwanisa kuponeswa nekugamuchira Kristu saIshe nemuponesi wako, asi hauzove chikamu chemwenga waKristu. Munguva yekutambudzika kukuru munozogamuchira kumutswa kakaomarara apo muenge mave kufanira kufira kutenda kwenyu. Makore 1 000 anozouya munozomutswa kuti muvepo paZuva reKutongwa. Kana musina kuramba kutenda kwenyu munguva yeKutambudzika mucharegererwa, asi muchazopedza nguva isingagume yese muchirarama muri kunze kweguta guru, Jerusarema Idzva nekuti ndiwo musha mutsva weMwenga waKristu.
ZVAKAZARURWA 13:9 Unenzeve, ngaanzwe.
Kunzwa zviri muMagwaro nekuzvitenda nekuzviteerera ndicho chinhu chakakosha pakurarama kwanhasi.
Tinofanira kusarudza pakati peBhaibheri kana kuti chitendero cheMasangano.
Shoko kana kuti nyika.
ChiKristu kana kuti chichechi-chechi.
Kudya kana kuti kudyiwa. Fungai nezvemakora anodya pazvitunha kumashure kweAmagedhoni.
ZVAKAZARURWA 13:10 Kana munhu achitapa uchatapwa, kana munhu achiuraya nemunondo unofanira kuurawa nomunondo. Ndipo pano kutsungirira nokutenda kwavatsvene.
Kutsungirira nekuti kuipa kunofanira kuita basa rako. Mukombe wekutadza nebwoni unofanira kuzadzwa. Tinofanira kumirira nguva yaMwari.
Kutenda kunouya chete nokunzwa Shoko raMwari.
VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa nokunzwa kunovuya neShoko raMwari.
ChiCatholic chakatapa mabhiriyoni kuti vapinde mubato rechitendero chemasangano. Magumo azvo ndiro gomba risina muganhu ravasingazokwanisi kupunyuka.
Babironi, Egipita nemarudzi evatorwa vakawana pfungwa iyi kubva mugomba rechipegani. Chichechi-chechi (chakasiyana nechiKristu, zvisinei nekuti vanoti zvimwechete) chakagadzirirwa kutidzosera shure kugomba rechipegani.
Vanhu vaive vasiri maCatholic 68 miriyoni vakauraiwa nekereke yeCatholic mukati uye vachangobuda muNguva yeRima. Kwekupedzisira, mumashure mekunge atora chiPope kuti ave nesimba repasi rese, Antikristu achasiya Vatican apo achanyengera vanhu pamusoro peJerusarema idzva nekutamira kuJerusarema. Ipapo vadzvanyiriri gumi vakapa Antikristu simba ravo rehondo vachavenga kereke yeCatholic vodonhedzera bhomba renyukiriya paguta reVatican. Bhomba renyukiriya ndiwo munondo mukuru wakaitwa nevanhu sechombo chehondo. Inenge yave nguva yekutsiviwa yeCatholic kutsiviwa kuuraya kwavakamboita mamiriyoni evanhu nemunondo muNguva yeRima.
Mwari havakanganwi zvivi zvatisina kutendeuka kwazviri.
Chikara ndicho simba guru munezvemweya muchitendero chemasangano chakakurudzirwa naSatani kuti vanhu vavake kuitira kuti ashandise simba rekereke uye simba munezvemari mukereke kuti atonge nyika.
Mukati menguva dzepakati, Middle Ages, apo Pope aive aine simba rezvechitendero apo aikwanisazve kushandisa mauto emadzimambo echiCatholic kubvisa maKristu aimupikisa, ipapo akabva akwanisa kugadza simba rake.
Asi nguva dzakapoteredza 1750 AD John Wesley kuEngland akatanga kuparidza hutsvene uye kufambira vanhu munguva huru yekereke yenguva yechitanhatu yeFiradhefia (zvinoreva kuti rudo pakati pehama munaShe). Kurudziro yemurume uyu yakatsvaira mukati mevazhinji pakarepo chiitiko chekuti nyika iuraye maKristu vanopikisana nezvawaitenda chaive chisisiri chinhu chinotambirika zvachose.
Saka chimwe chikara chikuru, rimwe simba guru raifanira kumuka kuitira kubatsira simba raPope munezvemweya murudo rwake rwekutonga pasi rese. Kuuraya maKristu kwaive kwamiswa. Rimwe zano rakachenjera raifanira kuvatapa mumakereke emasangano, robatanidza masangano aya kuva mubatanidzwa mukurusa. Saka nekudaro zvinova nyore kuti Antikristu mukuru, apo anenge atora chipope, kuti aunze mubatanidzwa uyu pasi pehutongi hwake zvakare.
Muhafu yechaputa inotevera tinoona kusimuka pamasimba kwenyika hurusa pasi rese, America.
Chinzvimbo cheAmerica ndechekuunza makereke emasangano mumubatanidzwa kuitira kuti zvitendero zvemasangano pekupedzisira zvigoguma zvave pasi paAntikristu.
Hurongwa whezvitendero hune chinangwa chekuva nemari zhinji uye kuva nevanhu vakawandisa. Makereke ekuAmerica ane mari ndiwo anotungamirira. Mavaivai, zvinhu zvakashongedzwa sezvakanaka asi zvingori zvinhu zvenyika ino. Maitiro avo enguva dzavo dzezvidzidzo anoyevedza meso edu enyama. Mimhanzi yavanoridza ndeyedhisiko chaiyo. Vaparidzi vanogona kutaura zvepamusorosoro neivhangeri yekubudirira. Kereke inotongwa nemunhu mumwechete anova mufundisi. Vaparidzi vechikadzi vanodakadza. Vanorambana nekuroora kana kuroorwazve, ndiyani ane basa nazvo. Mvumo dzekuita zvepabonde. Izvi zvose zviitiko “zvechichechichechi” chiri pamakwikwi; kereke yangu yakakura uye iri nani pane yako. Mukereke mangu makasununguka nevaparidzi vakangwara uye vane mazano ane mbiri.
Fashoni yekuAmerika ndiyo inotungamira pasi rese. Majini, hembe dzacho, bhutsu dze Nike, nguwani kubva kumashure kusvika kumberi. MacDonalds, KFC, nzvimbo dzekutenga dzinonzi mamoro. Masupamaketi. Intaneti. Google. Kuenda muchadenga. Iphone. Ipads. Ipods. Bhomba reatomi rekutanga rakadonhedzwa neAmerica paAlamagordo (zvinoda kunzwika sekuti Amagedhoni nekuti muchirungu 7 emabhii 10 aripo akafanana).
Vaparidzi 9 pavaparidzi 10 vanoita basa rekuparidza zvenguva dzose vari kuAmerica. Saka pfungwa dzeAmerica, totenda simba redhora rayo, dzapararira nepasi rese. America inoita zvinhu nenzira huru kwazvo zvekuti imwe mhomho yepasi rese iripo pakutevera chete. America inodiwa zvese nekuvengwa, asi yagara inodadisa. Pfuma yavo zhinji inotyaira pasi rese. Hafu yewiti inodyiwa pasi rese inorimwa muAmerica. Vakakunda muhondo mbiri dzepasi rese. Yakatanga tsika yekuratidzira simba rezvombo zvemanyukiriya yakateve dzerwawo neRusia. Asi Russia yakapererwa nemari mukuita uku.vakatangidzazve kugadzirisa wuto ravo mushure mechiitiko cheVietnam vakatanga kushandisa mabhomba avanodaidza kuti simati nendege. Parizvino pasi rese riri kutatarika kuti ritevedzere mamiriro akaita wuto reAmerica. Nyika inoshamisa iyi inokweva pasi rese richiitevera.
Asi tinofanira kuziva kuti vari kuenda kupi.
ZVAKAZARURWA 13:11 Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika; chakanga chiine nyanga mbiri segwaiana chikataura seshato.
Chimwe chikara, mhuka inotsanangura America: Nyati . Hafu yekumberi kwenyati yakafukidzwa nemakushe segwaiana.
Johane aive asati amboona mhuka yakadai, saka akaifananidza negwaiana.
Johane aikwanisa kuifananidza negwaiana. Sarudzo yake yegwaiana yaive nechirevo chakadzama, chemweya. Kristu ndiye Gwaiana raMwari, saka nyika ine simba kwazvo yaisimuka iyi yaive nematangiro ehumwari. George Washington, mutungamiriri wekutanga weUnited Sates ye America aizivikanwa ari munhu “asingarege nhema dzichibuda mumuromo make”. Aburaham Lincoln aizivikanwa nekunzi “Abe akavimbika”. Mushanyi wekuFrance akaenda kuAmerica vachangobva kuwana kuzvitonga kuzere muna 1776, akatsanangura America achiti kwaive nepurupeti inopfuta nekururama.
Gwaro rakanyorwa pakawana America kuzvitonga rakaramba riri guru pamagwaro ese ebumbiro remitemo akambonyorwa. Kubva pamavambo akarurama aya America yakasimuka pamasimba kuva simba repasi rese pasina aifungidzira. Asi zvinhu zvakatanga kushanduka. Kurwisana uye zvibvumirano zvakaputswa pakati pavo nemaRed Indians zvakasiya zvasvibisa mureza wavo. Mutungamiriri wenyika Rooseveldt akatendera kuti ndege dzemauto dzitore chakavanzika chebhomba reAtomi kuenda nacho kuRussia mukati mehondo yepasi rese yechipiri. Akatendera Rusia kuti itore Europe yekumadokero. Mutungamiri wenyika Nixon aizivikanwa sa “Trickey Dicky” uye mutungamiriri wenyika Clinton ainzi “Slick Willy”. Hwaro hwaive hwadzikira. Nixon akazvisiisa basa asati abvunziridzwa pamusoro pekunyepa. Nelson Rockefeller haana kuzokwanisa kukwikwidza kuva mutungamiriri wenyika nekuti aive aramba mukadzi akaroorazve. Ronald Reagan, akaramba mukadzi akaroorazve, akava mutungamiriri wenyika muna 1980. Hwaro chaihwo hwaive hotsvedza.
America yaive yasimba kwazvo, asi yaisava nani. Shato, Satani, akatora kutonga mune zvematongerwo enyika kuti atungamirire America kubva pane zvakanyorwa muBhaibheri. Bhaibheri rakarambidzwa muzvikoro zvemuAmerica.
Simba reAmerica raidiwa kuitira kufadza pasi rese kuti vanhu vose vagotevera nekutevedzera zvese zvaiitwa neAmerica. America yakabva yatungamirira pakuvandudza nekuvaka 'chichechi-chechi' chemasangano.
Chikara ichi chakasimuka kubva panyika. Chikara cheRoma chakasimuka kubva paEurope yekumadokero yaive nevanhu 70 miriyoni muna 1600. Izvi zvaive zvakamiririrwa negungwa. Saka nyika inomiririra vanhu vashoma. Venhoroondo vanoti America yekuchamembe yaigarwa nemaIndian aisvika 100 miriyoni. Zvino vekuSpain vakapamba Mexico vakauya nechirwere chinotyisa chemhezi. MaIndian aive asina chekudzivirira chirwere ichi vakawanda vakafa nechirwere ichi. Saka kwakazova nemaRed Indian aisadarika 10 miriyoni akasara achigara muAmerica yekuchamhembe pakasvika vanaFata vaifamba nenyika nekuda kwechinamato muna 1620 AD. Vanhu vaive vasara vashomashoma sezvo America yakakurisa kupinda Europe yekumadokero.
ZVAKAZARURWA 13:12 Chinobata namasimba ose echikara pamberi pacho. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chine vanga raifanira kuchiuraya.
Roma ndivo mai vezvitendero zvemasangano. America ndiyo ine makereke mazhinji uye hupfumi whakawandisa. Saka inoisa kubata kwayo kukuru pakufunga kwemasangano. Kufunga kwemasangano kunobva papfungwa tsika neruzivo rwevanhu. Kereke yeRoma ndiyo ine tsika dzakwegura kwazvo dzinotevedzerwa nemamwe makereke. Dzidziso dzeCatholic dzinosanganisira kunamata Tiriniti uye rubapatidzo rwemvura mumaZita eZvinzvimbo matatu pachinzvimbo chemuZita raJesu Kristu. Vakabuda mairi, vemamwe masangano, kusanganisa America ichitungamirira inotenda mukuita uku kwese. Kisimusi yakaitwa nemaCatholic semhemberero dzetsika dzemapegani dzaive dzakapararira dzaive mhemberero dzekuzvarwa kwamwari wezuva (sun god). Nhasi uno kutenda kwemapegani kwakafa, asi makereke ekuAmerica, achivakwa pamusoro peIvhangeri rekuva netwunhu uye kuwana zvizhinji kubva mumabhizinesi zvinotungamirira nyika kunopemberera Kisimusi ( rinova izwi risiri muMagwaro nezuva risimo muBhaibheri). Saka makereke epasi rese anotevera kuita kweAmerica yakazadzisa kutenda kwechiCatholic.
13 chiverengo chinokosha. Iyi ichaputa 13 vhesi 13.
13 Chiverengo cheAmerica,
“Zvishamiso” zvinoitwa pano ndezvesainzi kana tekinoroji.
Zvizhiji zvinoyevedza zvesainzi dzemazuva ano zvinoitwa neAmerica, zvinoipa kukudzwa uye kurumbidzwa kukuru mumaziso evanhu.
America yakava nyika yakazvimiririra muna 1776 apo nyika 13 munzvimbo dzekumabvazuva dzakabatana kuita mubatanidzwa.
Mureza wavo wekutanga waive nenyeredzi 13 nemitsetse 13.
Nhasi uno mureza uchiri nemitsetse 13 asi nyeredzi dzawandisa nekuti dzimwe nyika dzese dzakaita seKentucky, Louisiana neArizona nedzimwewo dzakapindawo mumubatanidzwa uyu.
Chisimbiso cheAmerica chinoratidza gondo ( chiratidzo chekutonga kunoita America mumasimba ezvemuchadenga) rakabata bazi remuti wemuorivhi rine mashizha 13 (chiratidzo cherunyararo) nemiseve 13 (chiratidzo chehondo). Chisimbiso chine nyeredzi 13 mune nzvimbo inodaidzwa kuti nzvimbo yekukudzwa uye mitsetse 13 mumureza. Moto yavo ine mavara 13 yakanyorwa nechiLatin E Pluribus Unum, zvichireva kubatana mukusiyana siyana (pakuwanda, tiri vamwe).
Chisimbiso ichi chaimiririra kutonga kunoita America mune zvehondo (miseve) uye mune zverunyararo (bazi remuorivhi).
Zviitiko zvikuru kuAmerica mune zvesainzi musenturi yakadarika, apo America yakasimuka pakutonga pasi rese, kwaive kugadzirwa kwebhomba reatomi rakadonhedzwa paHiroshima muna 1945 uye kugara kwakaita Neil Armstrong kumwedzi muna 1969.
Bhomba reatomi rakadonhedzwa kubva pachinhambwe chinoita makiromita 10 (mamaira 6) rikaputika mamita 700 pamusoro penyika. Ipapo bhora remoto, rakajeka kupinda zuva, rakapinda pasi rikadya nekuparadza chese chaive pedyo naro kwemamaira anoverengeka.
Chikara cheAmerica, kuunza moto kubva kudenga mukati menguva yehondo.
Kuita kunovhundutsa nekutyisa uku kwakabata Japan ikakanda mapfumo pasi kumisa hondo yepasi rese yechipiri. America yega ndiyo yaive nebhomba reatomi vamwe vese vakaona kuti yaive yave nemasimba makuru ekutonga. Kukudzwa kweAmerica kwakawedzera.
Mufananidzo unoratidza bhora remoto rakaipa uye kufamba kunovhundutsa kwebhomba renyukiriya.
America ndiyo yakaita nyika yekutanga kuita tekinoroji inotyisa kudai, uye kusvika parizvino, ndiyo yega nyika yakakwanisa kudonhedza mabhomba eatomi pakati pehondo. Mabhomba aya ese akadonhera mumaguta ari muJapan.
Moto uchidonha kubva mudenga pamberi pevanhu.
Munhu wekutanga kusvika kumwedzi akazviita mukati mechinhu chekuendesa kumwedzi chainzi (Eagle) Gondo (zita rimwechete nechiratidzo chechisimbiso). Chikamu chaive chakaomesesa chebasa iri chaive pakupinda mumhepo inofemwa panyika zvakare sezvo roketi raizomhanya kudzoka panyika nekumhanya kwaiita makiromita 40 000 paawa rimwechete. Kumhanya kwakanyanya uku kwakakonzeresa pakusvika kwakaita roketi panyika. Chinhu chaichengetedza mudziya chaizopisa kusvika pa 6 000 dhigirizi saka chinhu chakatsvuka nekupisa ichi chaizorasa moto (kurasa zvidimbu zvidiki diki zvemoto zvaizobvisa mudziya wakanyanyisa uyu), zvichisiya munhu ari muroketi ari nemamiriro ekunze akanakisa. Vanotyaira ndege dzehondo vaive pabasa nguva idzodzo panzvimbo yaaisvikira vakaona roketi richiuya semoto wemheni kwemaminetsi matatu nehafu. Ipapo mhepo yakati wandei yakaita kuti roketi riti nonokei kufamba ipapo moto wakabvira kuitira kuti maparachuti avhurike. Bhora remoto raipfuta iri, parakabva, raive danho rekupedzisira rerwendo rwekumwedzi. America yega ndiyo yaive yakwanisa kusvitsa munhu kumwedzi. Hakuna imwe nyika yakagona izvi. Saka America yakakunda Russia pamakwikwi ezvemuchadenga kukudzwa kwayo pasi rese kukakurawo.
Muono wepedyo wekuuya kweroketi paraipinda zvakare mumhepo yepanyika richimhanya zvikuru.
Mufananidzo wakatorwa kubva pachinhambwe chakati rebei, kudzoka kunotyisa kweroketi rinoenda kumwedzi richiuya panyika.
Chikara America, chichiunza moto panyika kubva mudenga panguva yerugare.
Zviitiko zviviri izvi zvinoonesa simba retekinoroji rine America uye simba rayo pane zvemari kuti yaikwanisa kuwana mari yekuita tsvagiridzo dzesainzi dzinoda mari zhinji seidzi. Saka pasi rese rinotarisira kutungamirirwa neAmerica. Russia yakaedza kukwikwidza America pamakwikwi ezvemuchadenga ikatadza kusvika kumwedzi. Russia yakakwikwidzana neAmerica mune zvehondo muCold War ikasara isisina kana mari. Saka chiso cheRussia chaive chadzikisirwa cheAmerica chasimudzirwa.
ZVAKAZARURWA 13:14 Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara; chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo, chiya chakanga chiine vanga romunondo chakararama.
Mwari ega ndiye anokwanisa kuita zvishamiso zvakaita sekuporesa vanorwara nekumutsa vakafa.
“Zviratidzo” zviri kurehwa pano kubatana kwemakereke.
Vemagungano vakabuda muCatholic vakadaidza Pope kuti Antikristu. Asi nhasi vanodaidzana kuti hama dzakaparadzana.
“Zviratidzo zvekuita kwekufunga kwakarasika” kwemasangano kunoita kuti vanhu vanotenda zvakasiyana vauye pamwechete vaite kunge vanobvumirana.
Chero kukosha kuri pahuwandu hwevanhu varipo uye pakunamata, ipapo dzidziso inokanganwikwa nezvayo saka vanhu vanozongotenda mune zvavada. Dzidziso huru inoramba yakabatanidza makereke aya iTiriniti. Inosanganisa kutaura kuzhinji kusiri muMagwaro zvekuti vanhu havachavimbi neMagwaro pakusimbisa kutenda kwavo.
'Munhu weKutanga muhuMwari', 'Munhu weChipiri muhuMwari', 'Munhu weChitatu muhuMwari', 'Mwari Mumwechete muVanhu Vatatu', 'Kristu mukuzara kwohuMwari', Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Hapana kana chimwechete mune zvese izvi chakanyorwa muBhaibheri. Mukuita kwese kwekurasika kwevanhu uku vanhu havasati vatoziva kuti varasa Zita raMwari. Hakuna Zita rimwechete rekudaidza Mwari wevanhu vanotenda muTiriniti. Saka vanhu vajaira zvitendero zvisina maturo, zvakan'ora, zvisiri pachena saka vanotambira kumwe kukanganisa, sekubapatidzwa mumaZita matatu eZvinzvimbo Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene vachifunga kuti izita raMwari.
Sangano rakwegura pane mamwe ese ndereRoman Catholic. Rakakunda kuparara kwehushe hweRoma uye rikazvitsvagira simba mune zvemweya pamusoro pemarudzi evatorwa nekugadza madzishe avo nekutendeutsa marudzi aya kumaita maCatholic. Roma yakaedza kudzosa hushe hwayo munguva yeRima asi zvakakona nekuda kwekushaikwa kwesimba mune zvehondo. Zvino, zvakadaro. Vakashingirira pakuva kereke uye simba mune zvemari. Ndiyo nzira yebudiriro yemasangano. Iyezvino mamwe masangano ari kutevera mufananidzo weRoma nehupfumi hweAmerica hwakatungamirira munzira iyi. Kereke yeCatholic ndiyo bato rakapfumisisa muAmerica.
ZVAKAZARURWA 13:15 Chakapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chiraire kuti vose vasinganamate mufananidzo wechikara vavurawe.
Mufananidzo wechikara mubatanidzwa wemakereke wakaunganidza masangano ese epasi rese kuva ruwadzano rumwechete. Hapana kukoshesa dzidziso sezvo zvichikonzeresa kupesana. Saka vanhu vanokwanisa kutenda zvavanoda, chero vasina kunyanya kukoshesa kutevera Bhaibheri. Kune nzira dzinodarika gumi dzerubapatidzo rwemvura dzinobvumirwa chero pasina abapatidzwa muzita raJesu Kristu. Izvi havatenderani nazvo. Chinamato chemasangano chinobva chadiwa kumunhu wese. Unofanira kuva uchibva mune rimwe remasangano. Masangano kana makereke akasarudzwa ndiwo ega anotenderwa kutaura kana kuparidza. Vekunze vanorambidzwa kutaura kubata kwavo kwouraiwa. Panotanga Kutambudzika kukuru, avo vose vanosara vasina kutorwa kuenda kudenga kunosangana naShe vachauraiwa panyama zvakare. Vanhu vari mumakereke mazuva ano vanozvikudza zvakanyanya havade chiro. Vanotenda kuti vakachengetedzeka uye havadi gadziriso pane zvavanotadza. Vanotenda kuti havadi chiro, havatodi kuti pave nemunhu anovaudza kuti vatadza. Vanoti chero vakapfuma vachirarama murusununguko havangabude mune zvinotendwa musangano ravo. Asi kune masangano anodarika 30 000 akasiyana-siyana. Rimwe nerimwe rinotenda kuti riri munzira chaiyo. Asi vose vakasiyana. Saka havangavi vanogona vese. Asi hapana anombogaya kana kunetseka nezvazvo nezvazvo.
Chinangwa chese ndechekuunza munhu wese mukunamata nekutenda kwemasangano. America ndiyo inotungamirira sezvo vari nevaparidzi vakawandisa kukunda dzimwe nyika dzese. Chingotarisai kushanduka kwaita nziyo dzekuvonga nekurumbidza kuti munyatsoona zviri kuitika.
Mufananidzo wechikara ndiwo mubatanidzwa wemakereke emasangano epasi rese ari mumubatanidzwa wepasi rese wezvechitendero uye zvematongerwo enyika.
Ropa rehupenyu hwemibatanidzwa yese iyi imari.
Kusarudza mutungamiri wechitendero umwechete wepasi rese, Pope wekupedzisira, vanhu vanofanira kutanga kupinda musangano rinotungamirirwa nemunhu mumwechete, (pasita) mufudzi. “Mufudzi” rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva asi zvisinei atori nesimba repamusorosoro mukereke. Kereke inotozviwisira pasi pemufundisi iyi ndiyo nhanho yekutanga pakuenda kunozviwisira pasi pesangano. Hapana vhesi rinoti pasita ndiye mufudzi. Kungori kufunga kwevanhu. Hakuna kereke inofanira kuzviwisira pasi pemunhu. Itsika yeRoman Catholic yekuva nemupurisita anotonga ungano. Asi ndiko kukura kunoita mapato, saka vemasangano akabuda muRoma vanongotevera mufananidzo wavanoisirwa neRoma. Maungano ekuAmerica anongopa pasita ari kumhiri kwemakungwa mari sezvo anozoita kuti ave nechokwadi chekuti vatevera nekutenda tsika dzekuAmerica. Semuenzaniso, maMormons akauya kubva kuAmerica kuti asvikotendeutsa vanhu kuti vaite maMormons. Ndiwo mafungiro emasangano ese.
America ine mari yakawandisa kupinda ani zvake angakwikwidzana nayo. Mari yayo inopararira pasi rese vanhu vainopa mari yayo vanofanira kubvumirana nezvinotaura mupi. Saka vaparidzi pasi rese vari kuzviwisira pasi pemasangano ekuAmerica saka masangano aya apararira pasi rese. Totenda dhora reAmerica riri kupa mari “kukudza kereke” saka zvitendero zvakasiyana siyana zviri kuramba zvichipararira pasi rese uye makereke ese ari panzvimbo ari pakanaka panyaya dzezvemari kana vakaramba vakamira nemakereke ekuAmerica anovabatsira. Anopa mari ndiye anogara ari mukuru.
ZVAKAZARURWA 13:16 Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruvoko rwavo rwerudyi, kana pahuma yavo.
America ichaita kuti pasi rese rive pasi pezvirango zveupfumi. Kureruka kwakaita kutora zvikwereti kwaita kuti vanhu vakawanda vave nezvikwereti zvakakurisa. Pane nzira mbiri pakuti vanhu vanoona sei chiratidzo chechikara. Chekutanga chiratidzo kana vanga rinoonekwa rakaoma kuisa pamunhu wese anorarama panyika pasi rese vanodarika 7 biriyoni varipo panyika iyezvino. MaKristu akatarisira kuti vachaona tatu rakanzi 666, kana kuiswa kwevanga pamhanza dzevanhu. Asi izvi hazvingaitiki zvikapedza nyika. Parizvino vanachiremba havasi kutokwanisa kubaya vana vese nhomba.
Asi chichapedza nyika chiratidzo chemweya chakaipisisa chichave munjere dzedu.
Pfungwa dziri kuseri kwemhanza. Unofanira kupinda nepamhanza kana uchida kuwana pfungwa. pfungwa dzedu dziri pane mifungo yedu.
Kubatwa mafungiro ('kana kusukurudzwa pfungwa') ndizvo zvakamirirwa nechiratidzo chechikara.
ZVAKAZARURWA 7:3 Achiti: musatadzira nyika, kana gungwa, kana miti, kusvikira taisa chisimbiso pahuma dzavaranda vaMwari.
ZVAKAZARURWA 9:4 Dzikavudzwa kuti dzirege kutadzira vuswa bwenyika, nechinhu chinyoro kana miti yose, asi vanhu bedzi vasinechisimbiso chaMwari pahuma dzavo.
ZVAKAZARURWA 14:1 Zvino ndakatarira, ndikavona Gwaiana rimwe pagomo reZiyoni, rinavamwe vanezvuru zvinezana namakumi mana navana, nezita raro, nezita raBaba varo, rakanyorwa pahuma.
Mwari haanyori pahuma dzavanhu dzatinoona. Mwari anonyora mirayiro yake mupfungwa dzedu kuti atiite kuti titende maari. Huma dzatinoona dzinomiririra mifungo yemweya iri mupfungwa dzedu.
VAEFESO 1:13 Munaiye, nemi vo, makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo Evhangeri yokuponeswa kwenyu; munaiye, wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa;
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndirwo chisimbiso chaMwari muhupenyu hwemunhu mumwe nemumwe. Runomiririra Mweya waMwari unogara matiri uchitonga simba remunhu rekufunga uye kuita zvinhu. Mwari anosimbisa pfungwa dzedu nenzira yekuti Mweya mutsvene wake unenge uchitonga nekudzora mafungiro edu.
Satani haasiri iye wekutanga, anogara achitevedzera Mwari.
Saka chiratidzo chechikara mweya wekutadza unotora nekutonga pfungwa dzevanhu woita kuti vatende dzidziso dzisimo muMagwaro nezvinyakare zvisimo muBhaibheri. Chero chinhu chinotendwa musangano kana kuti chinhu chinotendwa chisimo muMagwaro chinokonzeresa zvinhu zvimwechete izvi, chero chiri chinhu chinopikisa Magwaro. Vanga kana chiratidzo mumavoko avo erudyi chinomiririra kuita kwavo kunotungamirirwa nekutenda kwavo. Pfungwa dzenyu dzinotonga zvinoitwa nemavoko enyu kutenda kwenyu kunobuda pamaitiro enyu. Ruvoko rweruboshwe runomiririra kuita kwenyu kwamunoita nechikonzero chekuti makafanira kuti muzviite.
ZVAKAZARURWA 13:17 Kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho.
Chiratidzo chechikara chinomiririra kuti pfungwa dzevanhu dzinodzorwa nekufunga mune dzidziso dzemasangano avanopinda.
“Kutenga kana kutengesa” zvinomiririra kutongwa mune zvemari. Kereke yeRoma yakasimuka mumasimba sesimba rezvechitendero uyezve rezvemari. America nehupfumi hwayo hukurusa inobata basa guru pakugadza kutonga kwekereke iyi muchikamu chezvemari. America ndiyo yakaita intaneti inoita basa guru mukuita hupfumi munguva yedu yezvetekinoroji, uye mukuramba ichigona kutarisa hupfumi hwevanhu kuti hunofamba sei. Kana computa ikatadza kuziva kadhi remunhu raanoshandisa kutora mari, zvinoomera munhu iyeye kuti akwanise kuitawo zekutora kana kutumira mari yake inenge iri mubhangi.
Chii chinoitika kana zvikanzi makadhi kana maakaundi emabhangi ave kupiwa vanhu vanoenda kumasangano ane mazita akanyoreswa chete? Kunzi unofanira kuva wekwaLuther kana muMethodisiti kana muBhabhutisiti kana wePentecositi nemamwe akadaro.
Zvinova zvinhu zvakaomarara kune chero munhu asingazivikanwi zvichibva pazita rekereke yaanobata ari kuti ave muchikamu chezvemari panyika yese. Kudaidzwa nezita rekereke yatinoenda zvinotiita kuti tive sangano. “Ini ndiri weBhaptisiti”.
Mazita emasangano aya ipfungwa yakatanga nemaKristu paKorinte mukati menguva yekereke yekutanga, ikaramba ichikura mune dzimwe nguva dzese dzemakereke apo vanhu vakazotanga kutora mazita evatungamiriri vaive vakasiya muenzaniso wakanaka (Priscillianists) kana mamwe mazita anomiririra nzira dzekufunga nadzo, akaita serekuti Gnostics (avo vanonzwisisa zvakavanzika).
MuTestamente Itsva vatendi vechokwadi vaizvidaidza chete kuti vaKristu kana kuti vatendi kana kuti vateveri vaJesu.
MABASA AVAPOSITORA 11:26 Zvino wakati amuwana akavuya naye Antiokia. Ipapo vakavungana nekereke gore rose, vakadzidzisa vanhu vazhinji-zhinji; paAntiokia vadzidzi vakatanga kunzi vaKristu.
Pauro aipikisa avo vaida kuedza kudyidzana nezita revamwe vaKristu vaive nembiri.
Hatifaniri kuzvidaidza mamwe mazita ese aya kunze kwekuti vaKristu.
“Ini ndiri muMharidzo” hazvisi muMagwaro sekungoreva kuti “Ini ndiri muAnglican” kana kuti “ndiri muCalvinisiti”.
I VAKORONTE 1:11 Nokuti ndakavudzwa pamusoro penyu, hama dzangu, navari vokwaKroe, kuti kune gakava pakati penyu.
12 Zvandinoreva ndizvo, kuti mumwe nomumwe wenyu unoti: ini ndiri waPauro, ini waAporo, ini waKefasi, ini waKristu.
Kefasi zvinoreva kuti Petro.
13 Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Makabapatidzwa muzita raPauro here?
Gakava rinomuka nekuti tiri vanhu venyama, takarasiswa nenyama nekuda kuzviunganidzira twunhu nekuda kusimbisa magungano, pachinzvimbo chekuva vanhu vanogara pamweya uye vanotsungairirira humambo hwaMwari.
I VAKORINTE 3:4 Nokuti kana mumwe achiti: Ini ndiri waPauro mumwe; ini ndiri waAporo; ko hamuzi venyama here?
Kuva sangano rine mbiri nekutevera munhu haisi nzira yekufambira mberi,
Chiverengo chezita rake. Izvi zvinoreva munhu.
MaKristu vakafunga mazita asingaverengeke ekutsanangura chimisikidzo chavo “chechichechi-chechi” mumasangano anodarika 30 000 akasiyana-siyana. Mazita ese emasangano aya anomiririra kufunga kwevanhu uye mazano evanhu, semuenzaniso Baptists, vakaita sangano riri pachinzvimbo chechishanu pakukura rine vanhu 105 miriyoni vanoritevera. Asi izvozvo zvese hazvisati zvavakwanira. Ndizvo here MaBabtists nemaCalvanists (vanotenda mukutemerwa kana kutarirwa) kana maAminians (vanotenda murusununguko rwekuzvisarudzira)? Asi chero zvese izvozvo hazvina kuvakwanira. Kune maArminians vakashandurwa nemaWesleyan Arminians nevanozviti maAminians vechinyakare. Asi zvakare izvi zvese hazvina kukwana. Kune maBaptists Ekutanga, maBaptists Echipiri, maBaptists ekuAmerica, maBaptists ekuChamhembe, nevamwe vakawanda zvichienda zvakadaro. MaAnabaptists ndiwo akatanga kuita rubapatidzo rwekunyika mumvura mumashure memutsiridzo vakawanda vavo vakanyudzwa nevamwe vaipikisa vaitenda mukumwaya mvura pakubhabhatidza vana.
Chinhu chakakosha kuti tizive ndechekuti Jesu akati tinofanira kubapatidzwa, asi haana kubvira ati tinofanira kuzvidaidza kuti maBabtists.
Saka zita redu toriwana kupi, tingawane chiverengo kupi? Munhu mumwechete, ane zita rakashandiswa kuvaka mudzi wesangano rekereke yeRoman Catholic.
Kana sangano iroro rikange raparadzira kurudziro yaro nesimba raro pamusoro peEurope, vemasangano vakapikisa vakabva vatevedzera nzira dzeRoma nekuti masangano avo anokwikwidzana nemaCatholic kuti vatonge nyika. Masangano eCatholic akaita mufananidzo uye akaratidza nyika kuti kereke inokudzwa sei uye inozorarama kwenguva refu sei. Vasiri maCatholic vanovatevedzera, sevanasikana vanotevedzera vanamai vavo.
Rimwe nerimwe, mukuverenga, masangano evanopikisa Roma akakundwa nemaCatholic. Asi kana masangano akabuda muRoma aya akasanganiswa pamwechete, vanova sangano gurusa, rakada kuenzana nereRoman Catholic.
Kana vemasangano akabuda muRoma neRoman Catholic vakabatana vanoita huwandu hwakaswedera kuzvikamu zvitatu kubva muzvina zvevanhu vanorarama pasi rino. Zvikamu 33 kubva muzana zvevanhu vanoita zvechitendero maKristu (Catholic ine vanhu vanoda kusvika 1200 miriyoni nevasiri maCatholic vane 1000 miriyoni vakatendeukako). Chitendero chiri pachinzvimbo chechipiri pakukura chine zvikamu 21 kubva muzana zvevanhu vari muzvitendero iMuslim.
Ngatichitarisei zita rimwechete remunhu rakashandiswa nemaPope pakusimuka kwavo kuva nemasimba pamusoro pemarudzi emaBabhariani zvakavagadza kuva misoro yekereke ine simba kwazvo muEurope.
ZVAKAZARURWA 13:18 Ndipo panokuchenjera. Unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu.
Pano pane chirevo chakachenjera chejecha regungwa raive rimire Johane.
Tarirai imwe yesungano dzakaitwa naMwari kuna Abrahama.
GENESISI 32:12 Ndimwi makati, ' Zvirokwazvo ndichakuitira zvakanaka, ndichaitawo rudzi rwako sejecha regungwa, risingagoni kuverengwa nokuwanda kwaro.
Hakuna munhu angaverenge jecha regungwa tsanga netsanga yaro . Zviri pachena nekuti tsanga dzacho dzakawandisa. Asi tarira mashoko mana akakosha: “risingagoni kuverengwa nokuwanda kwaro”. Nemamwe mashoko havangatori chiverengo chechikara. Iyi ndiyo mhando inoshamisa yevatendi vechokwadi. Nekuti vanogara maererano Shoko raMwari, havangatobatwi kana kuedzwa nechiverengo kana chiratidzo chechikara. Havangaverengwi pamwechete panoverengwa nhengo dzevanhu vanonamata mumasangano anodanwa nemazita akasiyana siyana.
Zvaive zvisiri kusvikira pasenturi yechisere ( 700 – 800 AD ) kuti kereke yeRoma yakava nesimba pamusoro pemakereke aMwari kupfurikidza kutsiviwa kwechinzvimbo chaPetro. izvi zvaiitwa neGwaro rakaitwa zvechitsotsi rinonzi “Donation of Constantine”. Rakatanga kuonekwa makore akapoteredza 752 AD, masenturi mana mumashure merufu rwaConstantine (337AD). Riine zita rakaiswa zvechitsotsi ramambo wesenturi yechina, Constantine mukuru, raive nekutanga kwedzidziso yekutsiva vaapositora rikatanga kubata zita “vicarius filii dei”.
Mungadaro musingakwanisi kutaura Latini zvakatsetseka, tichabata mazwi emutsetse mumwechete kubva paLatin yegwaro “Donation of Constantine”. Bepa iri rakatenderwa nekanzuru yekereke, rikapasiswa mudare reRoman Catholic canon law naGratian, rikazosimbiswa naPope Gregory XIII; (Pope akashadura karenda) rikashambadzwa nemudzidzisi weCatholic uyo aiita nezvenhorondo Lucius Ferraris, akazoburitsa pachena kuti raive gwaro rakaitwa muchitsotsi.
“Ut sicut Beatus Petrus in terris Vicarius Filii Dei fuit constitutus, ita et Pontiffices eius successores in terris principatus potestatem amplius, quam terrenae imperialis nostrae serenitatis mansuetudo haber videtur”.
Lucius Ferraris, Prompta Biblietheca, (edition of 1890), art, “Papa,” II, Vol. VI, p. 43.
Kuturikirwa kwazvo kunoverengwa kuchinzi:
Sezvo Petro akakomborerwa akaonekwa seakasarudzwa zviri pamurairo Pachinzvimbo (Vicar) cheMwanakomana waMwari panyika, saka Pontiff anova mumiririri wemukuru wevaapostora mumwechete uyu, anofanira kuwana simba rekutonga rakakura kwazvo mumagariro ane tsitsi nerunyararo kubva kwatiri nenyika yedu.
Christopher B. Coleman, The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, p. 13, writes :
Kana Constantine aive, tingati akanyora gwaro rakagadzirwa iri, rinongodaro risiri pakupa masimba ekukwidziridza chiBhishopu chekereke imwe pamusoro pemamwe makereke ese: asi gwaro rekaitwa zvechitsotsi iri rakava “chombo” chekuparidzira dzidziso yekutonga kwechipope nekusatadza kwavo kupfurikidza Petro.
Pope akati Petro ane makiyi eDenga saka vanhu vanofanira kuita zvinofadza Petro.
Zvaunoitira maPope, unofanira kufunga kuti uri kuitira Petro.
MaPope anowana kukudzwa kwawo nekutungamidza zita raPetro kumuita muapositora mukuru, vanomuaidza kuti Muchinda wevaapostora, ivo vanobva vati ndivo vakamutsiva.
Petro pachake haana kubvira azviti Pope, uye aive asina basa nepfuma kana kuva nenyika kana nzvimbo yaanoti yake zvinova ndizvo zvinokurudzira kusimuka kwekereke yeRoman Catholic.
Kukosha kwavakaisa pamunhu mumwechete, Petro, nekutaura kwekuti Petro aive “Vicarius Filii Dei” (pachinzvimbo cheMwanakomana) kunozarura chimwe chinhu chinodakadza chingangoitike.
“Vicarivs urbis Romae” zvinoreva kuti “pachinzvimbo cheguta reRoma”.
Hakuna bhii rinonzi “U” muchiLatin. A anoshandiswa pachinzvimbo cha “U”
Iri izita rechinzvimbo raipihwa kumumiririri wamambo kuRome kana mambo asipo.
KuLatin vanoshandisa mabhii akasarudzwa kumiririra manhamba.
PACHINZVIMBO CHEMWANAKOMANA WAMWARI
Latin inoshandisa V panzvimbo ya U wedu)
(D = 500 C = 100 L = 50 V = 5 I = 1)
Manhamba ese aya ukaasanganisa anoburitsa 666 chinova chiverengo chechikara.
Saka zita rechinzvimbo iri rinonzi nekereke yeRoma nderaPetro (iro iye Petro pachake haana kubvira azvidaidza naro) rinotionesa kereke yeRoman Catholic kupfurikidza Magwaro.
ZVAKAZARURWA 13:18 Ndipo pano kuchenjerera. Unoziva, ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
Kuchirungu “score” zvinoreva 20. “Threescore” zvinoreva 3 x 20 = 60. Chiverengo chechikara ndechemunhu. Kereke yeRoman Catholic yakan'oresa hushumiri hwemupostora Petro kusvikira, pakuti kuita kwavo kwese kwave nehukama nechiratidzo chechikara.
Petro pachake haangapomerwe pane izvi zvose sezvo asina kubvira aita zvese izvi.
Petro akambobvira ava muapostora mumakereke asiri emaJuda here, akamboita muapostora kumaHedeni here? Kwete. MaGwaro anobuda pachena panyaya iyi apo tichadzidza zvinhu zvinofadza pahushumiri hwake. Chekutanga, tichaona kuti Petro aive asiri Bhishopu weRoma, asi muapostora kumaJuda apo Pauro anoti:
Naizvozvo, vakati vavona kuti ini [Pauro] ndakapiwa [naMwari] Evhangeri kuno vasina kudzingiswa [maHedeni], saPetro kuno vakadzingiswa [maJuda] (nokuti iye [Mwari] wakapa Petro simba rekuva muapositora kuna vakadzingiswa, [maJuda] wakapawo ini simba rekuva muapositora kuvahedheni vakati vavona nyasha dzandakanga ndapihwa , Jacobo naKefasi, naJohane avo vainzi mbiru [dzekereke paJerusarema], vakatibata isu tose naBharnabhasi namaoko orudyi okuyanana , kuti isu tiyende kuvahedheni, ivo [Petro Jacobo na Johane] kuna vakadzingiswa [maJuda]…. VaGaratia 2:7-9, Douay
kubva paWikipedia, the free encyclopedia
Pepin (kana kuti Pippin) (akafa 24 Gunyana 768), aidaidzwa kuti Younger, ndiye aive mambo wekutanga wemaFranks (752–768) vaive verudzi rwemaCarolingian. Muna 741 iye nemukoma wake Carloman vakatsiva baba vavo, Charles Marter, sameya wepamuzinda uye mutongi wehushe mukati menguva yekupandukirana kwerudzi (737–743). Mushure mekusiya basa kwaCarloman (747), Pepin akapihwa mvumo naPope Zachary kuti abvise mambo wemaMerovingian wekupedzisira, Childeric III, akabva atora chigaro chehushe (752).
(Pepin aida rutsigiro rwaPope kuti ave mambo vari pamutemo verudzi rwemaFrank emarudzi rwevatorwa.
Pope aidawo Pepin kuti abvise maLombard emarudzi evatorwa vaipamba Italy .)
Chinhu chekutanga chikuru chakaitwa naPepin samambo kuenda kuhondo namambo wemaLombard Aistulf, aive adarikira atora imwe nzvimbo yeRoma. Nekukunda, akamaniidza mambo wemaLombard kuti adzose zvinhu zvaaive apamba kubva kukereke. Akazadzisa kuti chipope chaive chava neRavenna nePentapolis (maguta mashanu), iyo inodaidzwa kuti “the Donation of Pepin” Chipo chaPepin, ipapo maguta echipope akavapo ipapo kutonga kwenguva pfupi (zvematongerwo enyika) kwechiPope kwakabva kwatanga.
Pepin akabatsira Pope kuitira kuti Petro agomubvumira kupinda Denga.
Kereke yeCatholic yakawana nzvimbo kana chikamu chenyika chaibva kuRome chichipinda muItaly, chinonzi nyika dzemaPope.
Pope akagadza mambo werudzi revatorwa Pepin kuva mambo wemaFranks muna 752 AD zvese nemwanakomana wake Charlemagne muna 800 AD (mambo akaita mukurumbira pamarudzi ese evatorwa). Saka Pope akava muiti wemadzimambo pakati pemarudzi evatorwa. Apo marudzi evatorwa akatendeukira kuchiCatholic, Pope akabva ava mutungairiri wavo pamweya zvakare. Pope aive atanga kuwana simba raive rarasikirwa naCaesari weRoma.
ZVAKAZARURWA 17:2 Madzimambo enyika akaita vupombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe bwayo.
Chipope chakaita simba rakakwana uye rukudzo kuti chiyanane nehutungamiriri hwedzinyika pasi rese.
“Ndimi Mwanakomana waMwari mupenyu” [Mateo chaputa 16 vhesi 16] Pavadzidzi vose Petro oga ndiye aive nekuzarurirwa kuzere kwekuti Jesu aive ani.
Jesu akati, “Ndiwe Petro, pamusoro poruware urwu (ruware rwezaruriro yekuti Jesu ndiyani) ndichavaka kereke yangu; masuvo eHadhesi haangaikundi [Mateo chitsauko 16 vhesi 18]
Pope akashandura izvi nekutaura kuti Petro ndiye ruware. Petro umwechete iyeye aizoramba Jesu rutatu.
MATEO 26:33 Zvino Petro akapindura akati kwaari kana vose vakagumburwa; kwamuri ini handingatongogumburwa.
34 Jesu akati kwaari, zirowazvo ndinoti kwauri vusiku hwuno, Jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.
Petro ( petros muchiGiriki) zvinoreva kuti ibwe kana kuti hurungudo kwete ruware.
VAGARATIA 2:11 Zvino Kefasi wakati asvika Antiokia ndakamudzivisa pachena, nokuti wakanga ane mhosva.
12 Nokuti vamwe vakanga vabva kuna Jacobo, vasati vasvika, iye waidya navahedheni; asi vakati vasvika, akadzoka, akazviravura, achitya kuvadzingisa.
Saka Petro aida kuti maHedeni ararame pasi pemurairo wechiJuda. Pauro akagadzirisa Petro akaburitsa pachena kuti Petro aive asiri muapositora mukuru sezvinotaurwa nevekereke yeRoma. Akatombotadza dzidziso kureva kuti aive ari munhu anotokanganisawo! chinhu chikuru chekurangarira kune avo vanoedza kumuita Pope wekutanga.
MAKO 1:29 Pakarepo vakati vachibva musinagoge, vakapinda mumba maSimoni naAndrea, Jacobo naJohane vanavo.
30 Mai vomukadzi waSimoni vakanga vavete vachirwara nefivhiri. Pakarepo vakamuvudza izvozvo.
MARKO 3:16 Akatumidza Simoni zita rinonzi Petro.
Saka Petro aive nemudzimai. Saka akanga asiri Pope wekutanga sezvo Pope kana mupurisita weRoman Cathilic haatenderwi kuroora.
I TIMOTIO 4:1 Zvino Mweya unoreva pachena, kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa.
3 Vachidzivisa vanhu kuwanana.
Saka mutemo wekuti mapurisita nemaPope haaroori hausi muBhaibheri.
MATEO 16.19 Ndichakupa kiyi dzovushe hwekudenga . Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa nekudenga nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Pazuva rePentecosti, Petro akasunga rubapatidzo rwaJohane mubhabhatidzi kuti rwaisazoshanda zvakare. Johane akabhabhatidza kuti vanhu vatendeuke chete asi haana kutaura zita reMuponesi, Gwaiana rechibairo, ropa rake rakaita kuti kutendeuka kuitike.
MABASA AVAPOSITORA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nemumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. (Humbowo hwekuti tinonzwisisa kuti Mwari ndiani, uye hatina kunyengedzwa nemazano evanhu . Pamusoro peruware, zaruriro yekuti Jesu aive ani. Ndiye Mwari Baba, Mweya Mutsvene mukuru unorarama muMurume Jesu Kristu. SaBaba, Mwari aive pamusoro pevanhu vake maJuda. SeMwanakomana Mwari akafamba panyika muMunhu Jesu aive Emanuere, Mwari vanesu. SeMweya Mutsvene, Mwari vakadzoka kuzorarama mumoyo yevanhu vavo, chechi.) mukanganwirwe zvivi mugopiwa chipiwa cheMweya Mutsvene.
Saka kereke yekutanga yakaponeswa kupfurikidza kutendeuka uye kusukwa neropa reGwaiana. Vaizivawo zvakare kuti Jesu Kristu ndiro zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene. Rubapatidzo urwu rwakasunungura kunzwisisa kwekuti Mwari aive ani. Jehova wekuTestamente Yekare ndiye aingova Jesu wekuTestamente Itsva. Kana Petro aive Pope wekutanga zvakadaro aisatadza, tarirai aibhabhatidza muZita raJesu Kristu. Nei vakamutsiva, vanomutevera mutsetse murefu wemaPope, vasingaiti zvimwechete izvi? Vose vanobhabhatidza muzita raBaba Mwanakomana nereMweya Mutsvene kunyangwe vasingagoni kutsanangura kuti zita iri ndiyani.
Asi “kusunga nekusunungura” kwakatorwa naPope sesimba rekusungira kana kuregerera zvivi, zvaishandiswa nanaPope pakukwikwidza kwavo mumasimba ezvematongerwo enyika munguva dzepakati (Middle Ages).
MATEO 16:22 Petro wakaenda naye vari voga, (Jesu) akatanga kumuraira akati Mwari ngaakunzwirei ngoni Ishe hamungaitirwi izvozvo!
Nekunge apiwa makiyi, Petro akaenderera mberi pakunotadza, kurwisa Jesu.
23 Asi wakatendeuka akati kuna Petro, ibva shure kwangu Satani! Uri chigumbuso kwandiri nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu.
Mutsara wakajeka. Kiyi haina kudzivisa Petro kubva pakuva nepfungwa dzechisatani. Saka ko maPope vanozviti vane simba raPetro.
Tsika yechipositora inoreva kuti maPope anoti ndiwo akatsiva Petro saka nekudaro vanokwanisa kuregerera zvivi kana kuzvisungirira sekusarudza kwavo.
Pope Boniface I (418-22) akati hutungamiriri hwekereke yeuniversal iyo yakasiirwa Petro naKristu yakazopfuurirawo kune vaimutevera, Bhishopu weRoma, uye kuti kutonga kwapope hakushandurwi kana kudzokera shure. Hakuna munhu, Boniface akataura, anorega kuvateerera anoramba ari nhengo yemaKristu kana kuti anozova netariro yekuponeswa.
(Ko Paul akagadzirisa Petro pakukanganisa kwake?)
Pope Gelasius I (492-96) aive wekutanga kudaidza Pope kuti Pachinzvimbo chaPetro (Vicarius Petri) (vicar of Peter) uye chero kuti pachinzvimbo chaKristu (Vicarius Chiristi) (vicar of Christ).
“Vicarius Petri” zvinoreva kuti pachinzvimbo chaPetro. Pope ndiye mumiririri waPetro panyika.
II VATESARONIKA 2:4 Iye, unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari, kana zvinonamatwa; nokudaro kuti unogara saMwari mutemberi yaMwari, (guta rakanaka uye rakapfuma reVatican) achizviita Mwari (kukwanisa kuregerera zvivi kana kutadza kuregerera sezvo Pope anokwanisa kusunga nekusunungura zvivi).
Bhishopu weRoma, mumazuva ehushe hweRoma, ndiye aive mumiririri wamambo weRoma paaive asiri muRoma.
Saka Bhishopu weroma aive “Vicarius urbis Romae” (pachinzvimbo cheguta reRoma). Pakatyikidzirwa hushe nemarudzi evatorwa, bhishopu weRoma akabuda kuva semutungamiri uye mumiririri wamambo kuItaly.
Zvino Pope anozviti ndiye mumiririri waPetro. Vicarius Petri (pachinzvimbo chaPetro).
Zvino pope anoti Petro aive mumiririri waKristu. Vicarius Filii dei (pachinzvimbo chaKristu).
Zita rechinzvimbo iri raishandiswa kuna Petro chete. Hakuna humbowo nhasi uno kuti pana Pope ari kuzvidaidza naro. Petro haana kubvira atora kana kuzvipa chinzvimbo chakadai.
Saka Vicarius Filii Dei (666), kusvika pangakwanise kupiwa umbowo, rakashandiswa neKereke yeRoman Cathilic kudaidza munhu mumwechete, Petro.
Ikereke yeRoman Cathilic yakaedza kusimudza nekun'oresa chinzvimbo chaPetro.
Petro haakwanisi kupihwa mhosva panyaya iyi nekuti haana kubvira azvidaidza kudaro.
Kereke yeRoma ndiyo yakagadza Petro pachinzvimbo chaKristu.
Kristu ndiye musuwo, asi Petro aive nemakiyi emusuwo uyu. Saka vanoti zvakakosha kuti vagare vari parutivi rwaPetro nekuti ane simba rekuvavhurira masuwo eDenga. Saka Petro ndiye anosarudza kuti ndiyani akakodzera kupinda denga.
Nekuda kupinda Denga, marudzi evatorwa akabatsira Roma nekuti vaifunga kuti nekuita izvi, vaizowana nyasha kubva kuna Petro aizovasiya vachipinda Denga.
Nebuchadnezzar akavaka chiumbwa chemurume mutsvene Danieri chinova chikonzero nei Danieri haana kunamata chifananidzo chake iye. Saka Danieri haangapomerwe mhosva pamusoro pechiumbwa ichi.
Johane akawira pasi ruviri kuti anamate mutumwa aive muporofita.
ZVAKAZARURWA 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kudaro, nekuti ndiri muranda pamwechete newe. Nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuporofita.
ZVAKAZARURWA 22:8 Ini Johane ndini ndakanzwa, ndikaona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa nokuvona, ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvi.
9 Akati kwandiri: rega kudaro ndiri muranda pamwechete newe. Nehama dzako, vaporofita navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.
Isu vanhu zvinotiitira nyore kusimudzira vanhu vatsvene. Kunyangwe Johane, munhu aive pamweya, akawira pasi kuti anamate mutumwa.
ZVAKAZARURWA 13:18 Ndipo panokuchenjera. Unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
Petro haana kubvira ada chinzvimbo ichi. Petro haana kubvira apa masimba kune chero Bhishopu wekuRoma.
Petro paakabaira zanhi kuti kereke inofambiswa sei akanyorera kuvakuru (vatariri) kwete kuna Bhishopu wo zvake.
I PETRO 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwechete navo nechapupu chemadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti:
2 fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa (kwete kutsvaga hupfumi)
3 Musingaiti nesimba nezvamakagoverwa (Pope akasimudzirwa) asi muve vatungamiriri veboka.
Saka Petro haana kubvira abvumirana nekuti munhu mumwe atonge kereke.
MaPope anoda kuti muprista atonge sangano raakaiswa. Apo Pope anotonga mupurisita, saka zvakadaro anenge achitotonga kereke.
Vemasangano akabuda muRoma vakatevedzera tsika iyi vakabvumira kuti mufundisi atonge sangano.
Mwari vaida kuti chikwata chevakuru vatungamirire kereke imwe neimwe.
Hakuna humbowo kubva kunhorondo hunotsigira kuti Petro akambosvika kuRoma.
Pauro akanyorera tsamba kumaRoma akakwazisa vanhu vakawanda nemazita avo muchaputa yekupedzisira yeBhuku raVaRoma asi haana kubvira ataura zita raPetro.
Saka Petro aive asiri kuRoma pakanyorwa Mwadhi naPauro.
Pauro akataura nezvekugadza vakuru vakaroora pachinzvimbo chekubata basa mukereke, saka mutariri ndibhishopu. Saka bhishopu anokwanisa kuroora, zvisiri zvinotenderwa nechechi yeRoma.
TITO 1:5 Ndakakusiya pakrete nemhaka iyi, kuti upedzise kugadzira izvo zvakanga zvasara, nokugadza vakuru mumaguta ose, sezvandakakuraira.
6 Kana kunomunhu usina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwechete, una vana vakatendeka, vasingapiwi mhosva yokuti havazvidzori, kana kuti havatereri;
7 Nokuti mutariri unofanira kuva munhu usina chaangapomerwa, somuchengeti weimba yaMwari; asingaiti kuda kwake, asingakurumidzi kutsamwa, asingadi waini, asingarwi asingakariri fuma yakaipa;
Saka vatariri (mabhishopu) vangori vakuru vasina zvipomerwa. Mukuru munhu, Mutariri ndicho chinzvimbo chake.
Vatariri muBhaibheri vanotaurwa nezvavo vakawanda.
Kwaive nevakuru vaidarika mumwechete muguta reFiripi.
VAFIRIPI 1:1 Pauro naTimotio varanda vaKristu Jesu, vari paFiripi, navatariri navaranda vekereke.
Petro aive muapositora kumaJuda.
Izwi rekuti “muturikiri” (interpreter) rakabva paizwi rekuti “petr roma” zvichireva kuti “muturikiri mukuru”. Mapegani aitenda kuti murume mukuru uyu aizovaturikirira hurongwa hwevamwari vavo. Kuti awane simba pamusoro pemapegani Pope akaita tiriniti sezvakaitwa neveBabironi nevekuEgipita.
Marudzi evatorwa paakauya kuRoma zvaive nyore kuvanyepera kuti “petr roma” aive “Petro wekuRoma”. Saka chiCatholic chakavakwa pamusoro pekuzivikanwa kwaiita Petro. Asi Jesu akadaidza Petro kuti Satani kureva kuti zvinhu zvese zvinoitwa zvichibva paari hazvina kutsarukana kubvira pakutanga kwazvo.
Petro haana kubvira ati aive Pope. Aive akaroora uye akabapatidzwa muZita raJesu Kristu. Aiparidza kutendeuka. Akambotaura achiti “Sirivheri nendarama handinazvo” akaporesa aipemha pachinzvimbo chekumupa mari.
MABASA AVAPOSITORA 3:6 Asi Petro akati: Sirivheri nendarama handina; asi chandinacho ndinokupa Nezita raJesu weNazareta, simuka ufambe.
VanaPope vakapfuma, havana kuroora uye vakagadzira “Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene” se “zita” raMwari. Mazita ezvinzvimbo matatu angaite sei zita rimwechete? Vakaita Tiriniti apo Jesu akadzorwa kuita munhu wechipiri muhuMwari. Asi Pauro akaita zvaipikisa izvi. Akaisa kuzara kwehuMwari munaKristu.
MATEO 23:9 Musaidza munhu ari panyika baba venyu, nokuti mumwechete ndibaba venyu, ivo vari kudenga.
Mapurisiti achiCatholic anodaidzwa kuti “baba” (fata).
Izwi rekuti Pope rinobva paizwi rechiItalian rekuti Pappas zvinoreva kuti baba.
I VAKORINTE 11:4 Murume mumwe nomumwe, unonyengeterera kana kuporofita musoro wake wakafukidzwa, unoninipisa musoro wake.
Makamboona mufananidzo waPope musoro wake usina kufukidzwa here? Anogara akapfeka, paruzhinji, chinhu chekufukidza musoro wake.
Nei? Pontifex Maximus kana kuti Pontiff aive mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi, aigara musoro wake wakafukidzwa kuitira mabasa ake echipurisita. Pope akatora chinzvimbo ichi saka nekudaro anofanirawo kugara musoro wavo wakafukidzwa.
Mufananidzo uyu unoratidza mambo weRoma wekutanga Augustus, achibata saPontiff nemusoro wake wakafukidzwa.
Chiumbwa chamambo Augustus aive Pontifex Maximus kana kuti Pontiff (mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi) chinomuratidza chikamu chenguvo yake chakafukidza musoro wake.
Pope wechimanje manje achibata saPontiff akapfeka ngowani chena “yekugadzikira panhongonya yake” kufukidza musoro wake.
Korona yendarama yakanakisa inopfekwa naPope.
Jesu akapfeka korona yeminzwa.
Chisarudza mutungamiri wako.